ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး”
“စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မပြောင်းခင် ဒီစာကိုဖတ်ပါ” ပို့စ်ကို တင်လိုက်ပြီးသည့်နောက် ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်ဖတ်ရှုသူအရေအတွက် သိသိသာသာ ထိုးတက်သွားသည်။ စာဖတ်သူ မြန်မာတို့စိတ်ထဲတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားကြကြောင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြကြောင်း သိလိုက်ရ၍ ၀မ်းသာမိပါသည်။
အဆိုပါပို့စ်ကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ရေးထားခဲ့သော ကော်မန့်များကို ဖတ်ရသည်တွင် လူတို့၏ စဉ်းစားပုံအမျိုးမျိုး၊ ခံယူချက်အမျိုးမျိုး၊ စိတ်နေစိတ်ထားအမျိုးမျိုးကိုလည်း လှစ်ကနဲ သိမြင်လိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း အကြမ်းဖျင်း အမျိုးအစားခွဲခြားရပါမူ နှစ်မျိုးနှစ်စားသာ ခွဲခြား၍ ရမည်ထင်သည်။ ပထမ တမျိုးမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား မခံယူလိုသော အမျိုးအစားနှင့် ဒုတိယ အမျိုးအစားမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံယူခြင်းသည် ပါးနပ်လိမ္မာသော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အုပ်စု၏ အကြောင်းပြချက်များမှာ မြန်မာသံရုံးသို့ အခွန်ငွေမပေးဆောင်ရရေး၊ ကလေးများ၏ ပညာမြင့်မားရေး၊ အလုပ်အကိုင်စီးပွားဖြောင့်ဖြူးရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေး၊ အခြားနိုင်ငံများသို့ ထပ်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့သွားရန် လွယ်ကူစေရေး စသည့် အကြောင်းပြချက်များပင်ဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုး၍ ဟူသောအကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူ၏ ရာသီဥတုအနေအထားကို နှစ်သက်၍ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူရှိ လူမျိုးစုများ၏ ဖော်ရွေမှုကြောင့်ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူမှ အစားအသောက်များ၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ သုခုမအနုပညာများကို နှစ်သက်မြတ်နိုး၍ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးများကိုလည်းကောင်း လုံးဝမတွေ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲသို့ လျှပ်တပြက် ၀င်ရောက်လာသော စကားလုံးတခုမှာ “Marriage of convenience” ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပင် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စကားလုံးကို ၀ီကီ ပီဒီးယားတွင် ဤသို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
A marriage of convenience (plural marriages of convenience) isamarriage contracted for reasons other than the reasons of relationship, family, or love. Instead, suchamarriage is orchestrated for personal gain or some other sort of strategic purpose, such as immigration.
မြန်မာလို အတိုချုပ်ဘာသာပြန်ရမည်ဆိုလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမပါဘဲ အကျိုးအမြတ် တစုံတခုအတွက် လက်ထပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်တခုပြုလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သံယောဇဉ်၊ အကြင်နာ၊ သစ္စာရှိမှုတို့ကို အခြေခံကာ တည်ဆောက်သော အိမ်ထောင်တခုသည် ငွေကြေးအားဖြင့် မကြွယ်ဝသော်ငြား အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်ရေး၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အိမ်ထောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းသော အိမ်ထောင်ရေးတခု ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်သက်သက်ကိုသာ အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သော အိမ်ထောင်ရေးသည်ကား ငွေကြေးရုပ်ဝတ္ထုအရ ကြွယ်ဝချမ်းသာသော်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အကြင်နာ၊ သစ္စာရှိမှုတို့ကို အခြေခံသော အိမ်ထောင်ရေးလောက် အားကျဖွယ်ကောင်းမည်ကား မထင်။
မေတ္တာ၊သံယောဇဉ်၊ အကြင်နာ၊ သစ္စာရှိမှုတို့ကို အခြေခံထားသော အိမ်ထောင်ရေးတွင် မည်သို့သော အခက်အခဲများ ကြုံပါစေ (through thick and thin) အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်ကြမည်သာဖြစ်သည်။ Marriage of convenience သည်ကား မပြေလည်မှုတခု ကြုံတွေ့သည်နှင့် အလွယ်တကူ ကွဲသွားနိုင်သည့် အိမ်ထောင်ရေးမျိုးပင် ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ရေး ဥပမာကဲ့သို့ပင် နိုင်ငံတခု၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ခံယူလျှင်လည်း အဆိုပါ နိုင်ငံအပေါ်တွင် ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ နိုင်ငံသားတို့အပေါ် ကြင်နာစိတ်၊ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် သံယောဇဉ်နှင့် သစ္စာရှိမှုတို့ လိုအပ်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ယင်းတို့ ချို့တဲ့နေပါက မိမိနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသော နိုင်ငံတွင် အကြပ်အတည်း ကြုံသည့်အခါ (သို့မဟုတ်) အခြားနိုင်ငံတခုခုဖြင့် စစ်မက်ဖြစ်ပွားသည့်အခါ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာမစောင့်သိတော့ဘဲ အဆိုပါ နိုင်ငံသားသည် အဆောတလျှင် ကိုယ်လွတ်ရုန်းသွားမည်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အခြားနိုင်ငံတခုသို့ သွားရောက်ကာ နောက်ထပ် နိုင်ငံသားထပ်မံလျှောက်ထားမည်ဆိုပါက အိမ်ထောင်ရေးတွင် မကြာခဏ ခြံခုန်တတ်သူကဲ့သို့ပင် ရေရှည်တွင် မည်သူကမျှ ယုံစားဝံ့တော့မည်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးပင် နည်းနိုင်ပါသေးသည်။
ကျနော်တဦးတည်း၏ သဘောထားအမြင်အရမူ နိုင်ငံသားပြောင်းသည့်ကိစ္စကို ဟဲန်ဖုန်းမိုဒယ် အသစ်ပြောင်းကိုင်သကဲ့သို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသင့်သည့်အရာဟု မထင်ပါ။ အကယ်၍ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးစနစ်၊ လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရေမြေတောတောင်၊ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်၊ သံယောဇဉ် စသည်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အမှန်တကယ် ထိုနိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုး၍၊ သံယောဇဉ်ရှိ၍ သစ္စာရှိ၍ နိုင်ငံသား ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်မူကား အထူးအထွေ ပြောစရာမရှိပါ။ မှားယွင်းသည်ဟူ၍လည်း မဆိုနိုင်ပါ။ သို့သော် ပြောင်းလဲလိုက်သူ၏ ခံယူချက်နှင့် ပြောင်းလဲပုံ ပြောင်းလဲနည်းကတော့ အရေးကြီးသည်ဟု မြင်ပါသည်။
အကယ်၍ သူ့နိုင်ငံသားခံလိုက်သော်လည်း နှလုံးသားမှာမူကား သူ့နိုင်ငံအပေါ်တွင် မရှိ။ (စင်္ကာပူနိုင်ငံသား စားပွဲတင် တင်းနစ်ချန်ပီယံ လီကျားဝေ ၏ အဖြစ်သည် အတန်ငယ် အကျည်းတန်လှပါသည်။) ယုတ်စွအဆုံး အာဆီယံဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်တောင် မြန်မာအသင်းဖက်က အားပေးရမည်လော၊ စင်္ကာပူအသင်းဖက်က အားပေးရမည်လော မဝေခွဲလောက်အောင် ဖြစ်နေပါက ထိုသူအဖို့ အရာရာတိုင်းတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတပိုင်းဖြင့် Identity Crisis ခေါ် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာ ပျောက်ဆုံးနေသည့်အဖြစ်ကို ကြုံတွေ့ရပေတော့မည်။
ထို့ကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ခံယူမည်စိတ်ကူးလျှင် ဤအရေးများကိုပါ ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟု ထပ်လောင်းရေးသားလိုက်ရပေသည်။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, August 19, 2009
ကင်းလိပ်ရှော (ဆောဒီး မှားလို့) ဘားနတ်ရှော က ပြောဖူးတယ်။
"Marriage without love isalegal prostitution" တဲ့။
yeah... great post!!! bro...
"Marriage without love isalegal prostitution"
I agreed with you..bro ZT
ကမ္ဘာမကြေ ကို အားပါးတရ ဆိုကြတဲ့ အခါ
ဘယ်လို မျက်နှာနဲ့ လိုက်ဆိုရမလဲဗျာ....
ဘယ်လောက် ဘဲ အခွင့်ရေးတွေ ရနေပါစေ
အစ်ကိုပေါ ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ဒီလင့်လေး
(ဒီစာလေး) ဖတ်ရတဲ့ အတွက်.....
August 19, 2009 at 8:55 PM
Maung Naing said...
ကိုပေါရေ.. ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးနဲ့ ဥပမာ..
August 19, 2009 at 9:12 PM
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံခြားသားအနေနဲ့ ပြန်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲတောင် ထည့်လို့မရတာပါ...။
အိမ်ဝယ်ဖို့တောင် မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ပီအာရ်ပြန်အပ်ရင် ပီအာရ်မို့ဆိုပြီး သက်သာခဲ့တဲ့ငွေတွေ လျော်ရမှာမို့။ ခုလည်း မဝယ်နိုင်သေးပါဘူး၊ ဝယ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်း ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး...။
ဒီနေရာမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တူ သဘောတူမို့ ဝမ်းသာရသေးတယ်..။
မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ကိုတော့ အသည်းစွဲချစ်နေ လွမ်းနေသေးတယ်။
နိုင်ငံသားလျှောက်ပြီးမှ cancel လုပ်လိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေလင်မယားကြောင့် ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် ဝမ်းသာရတယ်။
မိန်းမက နိုင်ငံသားခံချင်၊ ယောက်ျားက နိုင်ငံသားမခံချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းလင်မယားကြောင့် ရင်မောရတယ်။
yeah!! great post!! same with anonymous!! i admire to u, ko gyi paw! thks
It is too early to say that which is good or bad.
This isagenerative concern.
Our parents' generation has their own vision & mission.
We may have our own.
Our new generation may have their own. Your right decision may be suit with them or may be not.
Anyway, don't regret yourself in the future for what you have done.
ကိုဘအောင် ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ Article ကော သေချာဖတ်ကဲ့လား။
ဒီမှာ reality ကိုချပြနေတာ။ ကံကိုယုံပြီး ချေးပုံနင်း ရင် နံမနံ ဆွေးနွေးနေ တယ်
ထင်လို့ လား။ ခက်တော့တာပဲ။ too early to say နဲ့ တောင်လာတွေ့ နေသေးတယ်။
August 19, 2009 at 11:12 PM
Thanks Ko Paw, this post gives mealot of thoughts. I honestly admit I wanted to convert to S'pore citizen for some advantages. But the problem until now is I don't love Singapore. I even hate Singaporean. Why you know? Singaporean did insult our Myanmar people. They asked me such kind of question like "your Myanmar ppl are dying from hunger bcoz your country is very poor? Is it true?" Such kind of question. I really hate this. I need some revenge to them.
စလုံးကို ရွေတွေပိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဆိုပြီးကြေငြာမလို့လားမှမသိတာ
I think most of the PR initially not interested to convert to Singaporean because may be still can enjoy some benefit here and thinking of take back all the CPF and Enjoy, but eventually after got married, mind set changed because of children study, child care subsidy,discrimination from singaporean children, Medical Benefit etc. actually how many PR can afford without subsidy with childrens or Medical Benefit for long term staying in singapore? so finally the environtment forced them to convert and sacrifice for their childrens....
One more thing is "Arrange Marriage". How about that?? You do not have Love before marriage. But afterawhile you can see good thing about your partner, you still can fall in love with them. Now our country Ppl situation is something like that... our parents (Junta) forced us to marry who we actually do not fall in love with. :) Of course we DO NOT LOVE SINGAPORE nor SINGAPOREAN. Think again... How we treated Kalar from Burma?? What did we think/ say when we were there?? So same thing is happening in Singapore. Most of us are Buddish I suppose, so....This is Fate thats it. ACCEPT it.
Another thing is that From the conclusion the Author recommended us to convert if Singapore accept Dual Citizen or get more benefit. So the author is looking for.................. (Pine Loan or .....what?) I used this word because this post compare with Marriage life.
Main thing is that We have to always remember where we were from! Who we are! You still have to carry forward our culture to next generation... This is our Duty. If you guys missed one of the facts above there is no different between PR and Newly SG citizen.
Hope you guys still remember Aung Ko Latt song "Min A Myae Mat Par Min Myanmar" enven though Policy song still apply to ever Burmese in Oversea.
For the passport asaspringboard to emigrate to US/UK/Ausi countries. yes, convert!
Hehe like convert to other religion
(can marry4wives) :D
August 20, 2009 at 1:30 AM
Well average Singaporean is better behaved than average Burmese. You do not have to feel resentment towards all Singaporeans for some ugly Singaporeans who are short sighted and lowly character and inadequately educated.
"Thanks Ko Paw, this post gives mealot of thoughts. I honestly admit I wanted to convert to S'pore citizen for some advantages. But the problem until now is I don't love Singapore. I even hate Singaporean. Why you know? Singaporean did insult our Myanmar people. They asked me such kind of question like "your Myanmar ppl are dying from hunger bcoz your country is very poor? Is it true?" Such kind of question. I really hate this. I need some revenge to them."
August 20, 2009 at 7:03 AM
Convert to "panty guarding religion" in which as the God who called himself Yallah or AllBah any weird sounded name will ask his (may be her) followers of the faith to kill their own sisters if someone invades
the wrong sides of the girls' panties.
When you can have steak (Buddhism) why will you eat shit ("Panty Guarding Religion"). You can marry 100 wives asaBurmese man, thanks to our panty guarding brothers. Burmese government had to enact those laws to protect Burmese girls from losing inheritance if they did not convert (let their panties guarded by Yanwah or Allilar). So
a Burmese girl can marry any Burmese citizen, without conversion to any other faith, she can still claim for inheritance when that bastard dies.
Thank you Panty Guarders!
"Hehe like convert to other religion
(can marry4wives) :D"
August 20, 2009 at 8:44 AM
Quote : "One more thing is "Arrange Marriage". How about that?? You do not have Love before marriage. But afterawhile you can see good thing about your partner,..."
Yeah lor..Thruuue..!( Saying True like Kumar :P )
Arrange Marriage? Can.ann, why not.That's good wat!
How about dat? Arrange Marriage with prostitute..also can lah..
you know..you can enjoy first world customer service at home everyday mah..even you no need to work already lah..
Some more ah..you can fall in love with her sexy sexy way of treating you lah..true or not!
Ah-la-mak!!!..no need regret leh`..just go ahead.:))))))))))))))))
hehehe.. love this.
please remember, we just change citizenship not race. we still burmese, i still believed that i'm burmese even though i converted to SG. we speak burmese with my kids at home because i want them to fluent when they grown. i'll teach and send my kids to myanmar every year to learn Myanmar language writing and reading.i like myanmar food from my blood and my kids as well.
Offcourse I will sing GaBaMaKyay and strongly support myanmar team when they play against SG team football.
WHEREVER I LIVE AND HOLDING ANY PASSPORT, I AM STILL BURMESE..YOU ALL AS WELL
Don't be so narrow minded.
We are still in one world. Converting citizenship is just like changing IC (MartPoneDin)in myanmar. You born in Mandalay but come to Yangon, studied , married, Got Kids, bought house and children are studying in Yangon. you just go back to mandalay onceayear. so you still want to hold mandalay IC (MartPonrDin)? you and your family need to inform every week to SalAheinGaung if you holding Mandalay IC because you are visitors. But you change to Yangon IC you no need to go YaWaTa office every week. something like this..One World, One Dream, One National, Still Burmese...
August 20, 2009 at 11:09 AM
Ko Bo Hein,
Nobody blame you,bro.That's your own choice.
You know what you are doing, you know all the pros and cons and you are happy with your decision, everything would be fine.
But pls don't blame those who are sharing the need-to-know informations for anyone to seriously consider before they made their decision.
So far, both ko paw and the annon writer are not stopping anyone from converting or blaming anyone who has already converted.
Read those carefully and be cool down, bro! They are just giving you all the info that you need to consider and the way it should be even when you decided to do so.
The rest is just for you to decide.
Remember!you are in charge of your own life. You will be the one who has to take the responsibilities and consequences of whatever decision you've made.
I think you should only need to find the way how to Convert to Myanmar Citizen after Our country is developed.
This time you should advice to people to convert SG citizen to prevent paying income tax to myanma Junta.
I believe every body love myanmar only they are forced to convert.
Dear Bo Hein,
I believe that no one ever forced you to convert to Singapore citizenship. The decision could only be made by you, yourself.
Other Burmese including me are paying the income tax to MM Embassy too. Even though we know it is very unfair tax (considering the double-taxation avoidance agreement signed by Sg gov and Junta), 1440S$ per annual is still manageable amount. For me, this reason is not valid enough to renounce my own citizenship. I don’t want to do this especially when our country and our people need us to get out the current political deadlock.
I am not forcing anyone either to retain or renounce their citizenship. Nobody can do that too. It is up to the individual to decide. But, as an anonymouse above mentioned, I am just sharing the need-to-know informations for anyone to seriously consider before they made their decision.
Thanks for your interest in this topic.
you called me "anonymouse".That's too bad, Bro.:D
I am human par...:))))))
For those of holding PR, employment pass, are we living together without marriage?
ငါ့သားကြီး ဘိုဟိန်းက ငါ့ကိုချစ်တယ်တဲ့။ လုပ်… လုပ်ချင်တာလုပ်။ ကောင်းမယ်ထင်လို့ လုပ်တာ
အမေသဘောတူတယ်။ ဟဲ့ အကြီးကောင်နဲ့အငယ်ကောင် တိတ်တိတ်နေစမ်း၊ သွားသွား
သားဘိုဟိန်း နောက်လှည့်မကြည့်နဲ့ ။ သူတို့ နဲ့ စကားလိုက်များမနေနဲ့ တော့။
အမေနားလည်တယ်၊ သားတို့ ရဲ.့ လိုအင်တွေကိုဖြည့်မပေး
နိုင်တဲ့အမေ့ကို သားမမုန်းတာပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပီ။ ချစ်တဲ့အမေ။
August 20, 2009 at 12:47 PM
Living together without marriage is nothing wrong as long as it is consensual (if both parties agree). The most important is the two people love each other. It is far more better than the marriage without love.
There is nothing wrong in practising "living together". People all over the world is starting to accepting it. It is happening in conservative Myanmar too, in the park, on the Kaut-Yoe-Pone, in the bushes. So, you'd better accept or lockup your children.
Therefore, as Living Together is nothing wrong to the lovers, holding PRs and EPs are nothing wrong to foreigners. Mind that the writer is even not blaming those converting the citizenship, but just pointing out that those who converted can face the identity crisis.
Long Live "Living Together" on the Kaut-yoe-pone.
August 20, 2009 at 12:53 PM
Thanks for your patiency,
i'm not saying only for myself too.
You are giving advices to people including me. I like your thoughts but try to give both good and bad.
Don't just leave all the necessary infos.
If you think money matter, need to think about maid leavy $1260 more per year, childcare fees $3600 more per year per kid(no more subsidy for PRs), School Fees for University when Kids are grown up, HDB Housing Loan at least $1800 more per year, Health care for parents like me nobody in myanmar can take care them (they will be charged with foreigner rates). Some Good insurance not selling to myanmar citizen. so how much you can save per year. if all this money go to myanmar poor children, Schools, How? I'm not attracting, showing some facts.
There always have good and Bad.
I even thought that this writer must be from SPDC. because they will get lesser income tax for them. we are giving tax more than US$50.0 Millions per year from singapore alone.
Pls don't confuse people ko Paw.
August 20, 2009 at 1:04 PM
တယ်ဟုတ်ပါလား၊ အနစ်နာခံမယ့်လာ့း။ သာဓု သာဓု။ ဒါဆို တမျိုးသားလုံးကို နိုးဆော်ရအုံးမယ်။
ကိုဘိုဟိန်းလို အနစ်နာခံပီး စလုံးခံကြပါလို့ ။
ကိုပေါရေ… ဥပမာလေးချပြသွားတာ လှတယ်…
August 20, 2009 at 1:44 PM
Pain or Who Gain is depend on how you use it.
August 20, 2009 at 1:50 PM
Yay!!! Lee Kwan Hein is the best.
ဘာလို့ နိုင်ငံသား ပြောင်းဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိထားပါတယ်။ တချို့
အချက်အလက်တွေ ရှာချင်သေးတာနဲ့ မရေး ဖြစ်သေးတာပါ။ ခုကြုံကြိုက်လို့ ဖော်ဝပ်အီးလ်မေး ဖတ်ပြီး သိသလောက် ရေးလိုက်ပါတယ်။
အမည်မသိသူရဲ့ ဆောင်းပါးက ကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ တွေ့ကြုံရမယ့် အကြောင်းတွေကို စင်္ကာပူမှာ တွေ့ရမယ်လို့ ရေးထားတချို့က လွဲရင်ပေါ့။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား ပြောင်းထားတဲ့သူ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာတော့ အတော်များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီ ၂ နှစ် အတွင်းမှာ အတော်များ လာပါတယ်။
တိတိကျကျ ပြောရရင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး နဲ့ နာဂစ် အပြီးမှာပါ။ ကျွန်တော့် တယောက်စာ အတွက်ကတော့ တော်တော်ကို စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ အမြစ်ကို ထိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါ တခုထဲကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြား အချက်အလက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံအခြေအနေ နဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
စင်္ကာပူဟာ ခုချိန်ထိတော့ သူ့စီးပွားရေး သူထိန်းနိုင် ပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာ့အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျော ညီထွေရှိအောင် ပြုပြင်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - အရင်က သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းနဲ့ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပနဲ့ ဂျပန်
ကိုရီးယားက သင်္ဘောကျင်းတွေထက် သက်သာတဲ့ အလုပ်သမား၊ သင့်တင့်တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးကွက်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု တရုပ်က သင်္ဘောကျင်း လုပ်ငန်း တက်လာပါတယ်။ ဗီယက်နမ် ကတောင် ဈေးကွက်လုနေပါပြီ။ အဲဒီမှာ
သင်္ဘောထက် ပိုဈေးရတဲ့ Offshore ဘက် လှည့်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာရော နောင် ၁၀ နှစ် စိတ်ချရတဲ့ သမာအာဇီဝ လုပ်ငန်း (ဝန်ထမ်းအနေနဲ့) ရှိပါသလား။ ပေါင်းစားတဲ့
အလုပ်တွေဆို နေ့မြင်ညပျောက် ပိုတောင် ဖြစ်ပါသေးတယ်။
အခြားနိုင်ငံကို တဆင့်ကူးမယ် ဆိုတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း မဆိုးပါဘူး။
ဖွံဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပိုကောင်းတာ သေချာတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ စင်္ကာပူကတော့ ကုသရေး အဆင့်အတန်းတော့ မြင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ငွေရှာတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ နိုင်ငံသားတွေ အတွက်တောင် ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ အာမခံ ဝယ်ထားပါ။ တယောက်ကို အပြင်က မစိုက်ဘဲ Medisave ထဲကနေ ၁ နှစ် ၁၂၀ ဖိုးလောက် ဝယ်ထားရင် တော်တော် ကာဗာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ခန်းဝယ်တာမှာ အခွင့်အရေးရတာလည်း နိုင်ငံသားပြောင်းကြတဲ့ အကြောင်းရင်း တချက်ပါ။ အရမ်းတော့ အဓိက မကျပါ။ ပီအာလည်း ဝယ်လို့ရတာပဲ။ ဝယ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိရင် ပီအာ ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ဖို့ တိုက်တွန်း ပါတယ်။ အပြင်က ငွေသား မစိုက်ရရင်၊ ငှားတာထက် အများကြီး သက်သာပါတယ်။
Grant က ၃၀ဝ၀ဝ မဟုတ်ပါ။ အဲဒါက Basic Grant ပါ။ ပြီးတော့ အိမ်ဟောင်းပြန်ဝယ်မှ ရတာပါ။ HDB တိုက်ရိုက်ဝယ်ရင် မရပါ။ ဒါပေမယ့် HDB ဈေးက အပြင်ထက် ၅၀ဝ၀ဝ အနည်းဆုံး သက်သာပါတယ်။ နောက်ထပ် တမျိုးက Additional Grant ပါ။ အဲဒါက လစာပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ၅၀ဝ၀ ကနေ ၄၀ဝ၀ဝ အထိရပါတယ်။ ငါးနှစ်နေလို့ ပြန်ရောင်းရင် Additional Grant ပြန်ပေးစရာ မလိုပါ။ Basic Grant ယူထားရင် ပြီးတော့ ရောင်းပြီး
အိမ်ခန်းသစ် ပြန်ဝယ်ချင်ရင်တော့ ပြန်ပေးရပါတယ်။ ကိုယ်ယူထားတာထက်တောင် ပိုပေးရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တခု သက်သာတာက အတိုးပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ရင် HDBက တိုက်ရိုက်ချေးရင် အတိုးနှုန်းက ၂.၆% (CPF ကို အစိုးရပေးတာ + ဝ.၁%) ဆိုတော့ အပြင် ဘဏ်တိုးထက် သက်သာပါတယ်။
အိမ်ခန်းကို အစိုးရက ထိမ်းထားတာမှာ မကောင်းတာက လူတွေကို အိမ်ခန်းတခန်း ပေးပြီး၊ တသက်လုံး အစိုးရက ပိုက်ဆံ ထိုင်ယူနေတာပါ။ ကောင်းတာက လူတိုင်း အိမ်ပိုင်နိုင်တာပါ။ လစာနည်းတဲ့ နိုင်ငံသား မိဘနဲ့ နီးနီးနေရင်
၈၀ဝ၀ဝ အထိရနိုင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားတောင် အိမ်ခန်းပိုင်နိုင်ပါတယ်။ နောက် အိမ်ဖိုးငွေကို အာမခံ မဝယ် မနေရပါ။ ဥပမာ - ကျွန်တော် ရုတ်တရက် သေသွားရင်။ မိသားစုက အိမ်ဖိုးဆက်မပေးရတော့ပါ။ စိတ်နည်းနည်း
CPF ကို အစိုးရက ကိုယ့်ငွေကို သိမ်းထားတယ်။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ် လို့ပြောကြ ပါတယ်။ မှန်သင့် သလောက်လဲ မှန်ပါတယ်။ စင်္ကာပူဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အခွန်နှုန်းနည်းပါတယ်။ ဒီတော့ အသက်ကြီးလာရင် လူမှုဖူလုံရေးအတွက် လိုတာတော့ အမှန်ပါ။ CPF ထုတ်ပေးတာ နောက်ကျတာကိုတော့ မူရင်း
ကဲ .. CPF ခွဲဝေပုံကို ကြည့်ရအောင်။ လခ ၃၀ဝ၀ ရတယ် ဆိုပါစို့။ ကိုယ်ပေးရတာက ၂၀% ဖြစ်တဲ့ ၆၀ဝ ပါ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက ထည့်ပေးရတာက ၁၄.၅% ဖြစ်တဲ့ ၄၃၅ ပါ။ အဲဒီ အကောင့်ကို ၃ ပုံ ပုံပါတယ်။ Ordinary Account က အသက်ပေါ်လိုက်ပြီး ၆၇% ကနေ ၅၅% အတွင်း (၆၉၀ ကနေ ၅၇၀ အတွင်း)။ အဲဒါက အိမ်ဖိုးပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ထည့်တဲ့ ၆၀ဝ နဲ့ ယှဉ်ရင် မဆိုးပါဘူး။ ကျန်တာ ၂ ခုကApecial Account & Medisave ပါ။ အဲဒါက တကယ်ပြောရရင် ကုမ္ပဏီကို ကိုယ့်လူမှု ဖူလုံရေး အတွက် ထည့်ပေးခိုင်း ထားတာပါ။
ကျွန်တော်တို့လို ကြီးမှ နိုင်ငံသား ဖြစ်တဲ့ သူတွေ အတွက် အသက် ၅၅ နှစ်မှာ ငွေသား များများ မရပါ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက် ၆၂ နှစ်ကနေ နှစ် ၂၀ တလကို ၇၉၀ ရပါမယ်။ အဲဒီ အချိန် အိမ်ခန်းလဲ ပိုင်ပြီးနေပြီ ဆိုရင်၊ အိုစာမင်းစာ စားစရာရှိမှာပါ။
ဘယ်နိုင်ငံမှာ နေနေ ကိုယ့်လူမျိုးစရိုက် မပျောက် အောင်တော့ မိဘများက ထိန်းသိမ်း လမ်းကြောင်း ပေးရမှာပါ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့၊ မြန်မာစာ သင်ပေး ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကလေးကို မြန်မာစာသင်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။
သားသမီး အားမကိုးရလို့ ဒုက္ခ ဖြစ်ရတဲ့ ပုံပြင်ကတော့ အထူး ပြောစရာ မရှိပါ။ ဘယ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် သားသမီး မလိမ္မာရင် မိဘ ခံစားရမှာပါပဲ။
အပေါင်းအသင်းကတော့ ကျွန်တော့် အတန်းဖော် တဝက်လောက်က ဒီမှာပါ။ အလုပ်များလို့ မိသားစု အရေးရှုပ်နေလို့ သိပ်တော့ မတွေ့ဖြစ်ပါ။ အသက်ကြီးလာရင်တော့ ဖဲလေး ဘာလေး စုရိုက်ဖြစ်မလားပဲ။
နောက် အဓိက အချက်က ကလေး ပညာရေးပါ။ လောလောဆယ် စင်္ကာပူ ပညာရေး အဆင့်အတန်းက မြင့်ပါတယ်။
ကလေးတွေ အတွက် ဖိအားများတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ပိုလီ အဆင့်လောက်အထိက စရိတ်လည်း သိပ်မကြီးပါ။ နိုင်ငံသား ကလေးများအတွက် အစိုးရက ထည့်ပေးတဲ့ ပညာရေး စုဆောင်းငွေမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ပိုပြီး အဓိက ကျတာ တခုက၊ သာမန်ဥာဏ်ရည် သာမန်ကြိုးစားမှုပဲ ရှိတဲ့ ကလေးများ အတွက်ပါ။ ထူးချွန်တဲ့သူကတော့ အာဖရိကမှာနေနေ၊ အာရှမှာနေနေ ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံသွား ထိပ်တန်း ရောက်မှာပါ။ သာမန်ကလေးများ ကရော၊ စင်္ကာပူမှာ
သာမန်တွေ အတွက် သင့်တင့်တဲ့ ပညာရေး အဆင့်နဲ့ သင့်တင့်တဲ့ အလုပ် အာမခံမှု ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ခိုးဝင်ပြီး ပြန်နေတာတွေ၊ စင်္ကာပူက ၅ နှစ်ဆို နိုင်ငံသား ရပ်စဲတာတွေက အဓိပ္ပာယ် မရှိပါ။
သူမပြောတာ တခု ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ နိုင်ငံသား ခံလို့ရရင် စွန့်လွှတ်လို့လဲ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြီးလာတဲ့ တနေ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြန်နေချင်ရင် နိုင်ငံသား စွန့်လွှတ်ပြီး၊ အိမ်ရောင်းပြီး၊ CPF ထုတ်ပြီး ပြန်လို့ ရပါတယ်။
စင်္ကာပူကိုတော့ ၅ နှစ်လား မသိ ပြန်ဝင်လို့ မရပါ။
အိမ်ဂရန့်၊ အခွန်မဆောင်ရ၊ အခြား နိုင်ငံသွားလို့လွယ် ဆိုတာတွေက အခုမှ မဟုတ်ပါ။ အရင်ကတည်းကပါ။ ဒါပေမယ့် အခု နှစ်ပိုင်း အတွင်းမှာ ဘာလို့ နိုင်ငံသား အလုံးအရင်းနဲ့ ပြောင်းကုန်ကြသလဲ။
ဒီမှာ နေတာ ၁၀ နှစ် ဝန်းကျင် ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘာလို့ ဒီနှစ်ထဲမှာမှ ကောက်ခါငင်ခါ ပြောင်းကြသလဲ။
စောစောကပြောတာတွေထက် ပိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ပြောင်းမပြောင်း ကတော့ ကိုယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပါ။
August 20, 2009 at 2:30 PM
Mg Mg said...
ဒါဆို မပြောင်းရသေးတဲ့သူတွေ အရင်စာကိုဖတ် .. ပြောင်းပြီးသားလူတွေ အပေါ်က cohtet စားလေးနဲ့ စိတ်ဖြေပေါ့..
(မျိုးချစ်စိတ်တို့ .. ကျေးဇူးတရားတို့ ..ဘာသားရေးတို့ ..တိုင်းပြည်အနာဂတ်တို့ ထည့်မတွက်ရင်ပေါ့.)
Ko Gyi said...
ဖစ်နိုင်ရင် စ လုံး နိုင်ငံသားလဲ မခံ နဲ…
နအဖ အခွန်ရုံး ကိုလည်း ၁၀% ဆက်ကြေး
မတရား ဆက်ကြေး ပေးမဲ. အစား
ရတဲ.လစာ လေးရဲ. ၁% သို. ၂% ကို
ဒီမိုလှူတ်ရှား မှူ.မှာ ကူညီထောက်ပံ.ကြပြီး…
မြန်မာ ပြည် ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေး အတွက်
ကိုယ်.တာ ၀န်ကြေကြမယ် ဆိုရင်….
အကေါင်းဆုံးပေါ.ဗျာ ။ ။
Mg Mg..taw lite tar :)
စိတ်ဖြေစရာ မလိုပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ပြောင်းတာ ငရဲကျတာ မဟုတ်ပါ။ မေးခွန်းတခုရှိပါတယ်၊ အခြားနိုင်ငံသား အဖြစ်ရော ပြောင်းသင့်ကြပါသလား။ အမေရိကန်၊ သြစီ စသည် နိုင်ငံသား ပြောင်းသွားသူတွေကို ဘယ်လို သဘောရပါသလဲ။
ဘာသာပြောင်းတာ မဟုတ်ပါ၊ နာမည်တောင် မပြောင်းပါဘူး။ တပါတ်တခါ သမီးကို လိုက်ပို့ရင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်ပါတယ်။ အဲဒါက တကျောင်းပါ။ နောက်တကျောင်းမှာ ကျွန်တော် ကျောင်းကော်မတီဝင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ အကျိုးပျက်အောင် ဘာတခုမှ မလုပ်ဖူးပါ။ အခုလက်ရှိ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လူမှုရေး လှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပါပဲ ခင်ဗျာ၊ နောက်ထပ် ပြောစရာ မရှိပါ။
August 20, 2009 at 3:28 PM
Thanks, beingaPR is good enough
IN RESPONSE to letters by Mr Jimmy Loke ('The PR difference', last Saturday) and Mr Chia Kok Leong ('No school, no Singapore', last Saturday), I would only ask them to refer to Minister Mentor Lee Kuan Yew's speech reported last Friday ('MM: Foreign talent is vital'), where he gave an idea of the benefits citizens have over permanent residents (PRs).
I am happy to beaPR and although we do not get equal benefits in housing and other respects, that is understandable. We understand the difference betweenacitizen andaPR.
But where our children are concerned, we just want them to have the best education possible and I think we are not asking much. Citizens have the upper hand in buying homes and other respects, which is justified, but where schooling is concerned, 'every child has the right to get the best education possible'.
About living here for six years and not taking citizenship, I think this isavery personal choice. I would just like to end this topic by saying we are not here to compete with citizens but there are certain things on which one cannot compromise and children's education is one of them. I think we are not asking much and we are grateful to the Government for understanding that for every parent, his child's welfare comes first.
I would like to thank Mr Loke and Mr Chia for inviting us to become citizens but for now, I am proud to beacitizen of my country and have PR status in Singapore.
Sweta Agarwal (Mrs)
August 20, 2009 at 5:21 PM
အခုလို ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ၀င်ရောက်ရေးသားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ Cohtet တင်လာတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအပေါ်မှာ တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
စင်္ကာပူဟာ အခုအနေအထားမှာတော့ သူ့စီးပွားရေးသူ ထိန်းထားနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မငြင်းပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ ပီအာတွေ၊ အီးပီ၊ ဒဗလျူပီတွေ ဒီမှာ အလုပ်ရှိနေကြသေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲသည်အနေအထားဟာ အင်မတန်လျင်မြန်တဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ပျောက်ပျက်နေတယ်။ ဒါကို မူရင်းဆောင်းပါးရှင်က ထောက်ပြထားတာပါ။ စင်္ကာပူရဲ့ ကွန်တိန်နာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ သင်္ဘောကျင်းတွေဟာ လုပ်ခပေါတဲ့ အိမ်နီးချင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေဆီ အလျင်အမြန် ပြောင်းရွှေ့ကုန်ပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒေသတွင်းက နိုင်ငံတွေ (မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ တရုတ်) နဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၀န်ဆောင်မှုမှာတွေမှာ လုပ်ခနှုန်းထား ဘယ်လိုမှ ယှဉ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အခုအသက်ရှူချောင်နေသေးတာက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ မတည်ငြိမ်သေးလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် တနိုင်ငံ တနိုင်ငံဆိုသလို တည်ငြိမ်တဲ့ အစိုးရတွေ၊ ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရတွေအဖြစ်ကို ကူးပြောင်းနေပါပြီ။ ခါတိုင်းလူလည်ကျခံနေတဲ့ မလေးရှားတို့၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့၊ ထိုင်းတို့ဟာ အခု ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တစတစ ရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့အခါ အရင်လို လူလည်အကျမခံတော့ပါဘူး။
စီးပွားရေးအနေနဲ့ အခု စီးပွားပျက်ကပ်မှာ ဂျီအိုင်စီ၊ တင်းမာဆက် စတဲ့ အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းကြီးတွေ အကြီးအကျယ် အရှုံးပေါ်တာကို သတိထားမိမှာပေါ့။ အဲသည် လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပီအာတွေရဲ့ စီပီအက်ဖ်နဲ့ အခြားနိုင်ငံပိုင်ငွေတွေကို ၂.၅% အတိုးပေး ချေးပြီး ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေ လုပ်နေတာပါ။ အခုလို အချီကြီး ဘီလျံပေါင်းမြောက်များစွာ ရှုံးတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဆင်ပိုင် Shin Corp ကို ၀ယ်မိတာက စလို့ အရှုံးပေါ်တာတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်လို့ ဒဏ်တပ်ခံရတွေ၊ အခုနောက်ဆုံး စီးပွားပျက်ကပ်မှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဘဏ်တွေမှာ မြုတ်နှံမိလို့ အရှုံးပေါ်တာတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဘဲ။ ဒီ တင်းမားဆက်နဲ့ ဂျီအိုင်စီမှာ ဘယ်လောက် အရှုံးပေါ်နေသလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေ ဘယ်သူမှ သိခွင့်မရှိ။ လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင်နဲ့ စာရင်းစစ်ခွင့်မရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ ပြည်သူပိုင် ဘဏ္ဍာငွေထဲမှာ ငွေဘယ်လောက်ကျန်သေးသလဲတောင် ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။
အဲဒီလိုအနေအထားမှာ နောင်အနှစ် ၂၀ မှ ရမယ့် စီပီအက်ဖ်ကို မျှော်ကိုးနေတာဟာ လက်ရှိအာဏာရ ပီအေပီအစိုးရကို ယုံကြည်ကိုးစားလွန်ရာ ကျနေပါတယ်။ အခုတောင်မှ အစိုးရဟာ ပေးစရာရှိတဲ့ စီပီအက်ဖ်တွေကို မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထုတ်ယူခွင့်အသက်ကို တတိတတိ တိုးမြှင့်လာလိုက်တာ အရင် ၅၅ နှစ်ကနေ အခု ၆၂ နှစ်။ နောင်ဆိုရင် ၆၅ နှစ်မှ (၆၇ နှစ်အထိ တိုးမယ်လို့ ကြားတယ်) ထုတ်ယူလို့ရမယ်။ အကုန်ထုတ်လို့ရမှာ မဟုတ်သေးဘူး။ အနည်းဆုံးရှိရမယ့် ပမာဏကို ကျော်လွန်မှသာ ထုတ်ယူခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲသည်ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံထဲက လူတွေကို Life annuity ဆိုတဲ့ အာမခံကြေးတမျိုးကို မ၀ယ်မနေရ ၀ယ်ခိုင်းသေးတယ်။
အခု အိပ်ခ်ျဒီဘီ တိုက်ခန်းတွေရဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင် လစာ ၃၀၀၀ ရတဲ့လူဟာ သူ့စီပီအက်ဖ်ငွေထဲကသာ ငွေပေးမယ်ဆိုရင် ( အသက် ၃၀ လောက်မှ မြန်မာကနေ စလုံးပြောင်းလိုက်သူအဖို့) အသက် ၅၅ နှစ်လောက်အထိ အိမ်ဖိုးငွေ ဆပ်နေရဦးမှာပါ။ စီပီအက်ဖ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်မှ ကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်စင်ဆိုတာ မေ့ထားလိုက်ပါ။ စင်္ကာပူအစိုးရကိုယ်တိုင်ကပြောနေတယ်။ စီပီအက်ဖ်ငွေသက်သက်နဲ့ အနားယူလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ။ ဒီတော့ ဒီနိုင်ငံက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ဘာကြောင့်အနားမယူနိုင်ဘဲ အလုပ်လုပ်နေရသလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ။ စင်္ကာပူလူမျိုးအဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ အိမ်တွေကို ရောင်းပြီး ဒေါင်းဂရိတ်လုပ်ပြီး ငွေရှာနေရတာကို သတိပြုပါ။ အချို့ဆိုရင် အိမ်တောင်ပြန်မ၀ယ်တော့ဘဲ အိမ်ခြေယာမဲ့အဖြစ်နေကြတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေကို အစိုးရက ဖုံးဖိထားလို့ လူမသိပေမယ့် အင်တာနက်ပေါ်က ၀က်ဆိုက်တွေမှာ ဗီဒီယိုနဲ့ ရိုက်ကူးပြသထားတာ ရှာကြည့်ပါ။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်အောက်ဆုံးမှာ လင့်ခ်တွေ ပေးထားတာရှိပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တာက မိတ်ဆွေက ကျန်းမာရေးကောင်း ဒေါင်ဒေါင်မြည် အလုပ်လုပ်နေနိုင်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာ။ စင်္ကာပူမှာ တခုခု ဖျားနာမကျန်းပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာနဲ့ ဒုက္ခရောက်ပြီသာ မှတ်ပါ။ အစိုးရက ကူညီထောက်ပံ့တာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအမတ်ရုံးမှာ မျက်နှာအောက်ချပြီး ထောက်ပံ့တာလေး တပဲခြောက်ပြားရဘို့ သွားတောင်းရပါမယ်။
ဒါကြောင့် တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတာတို့။ မီးရထားလမ်းပေါ် ခုန်ချ သေကြောင်းကြံတာတွေ မကြာမကြာ ဖြစ်နေတာပေါ့။
August 20, 2009 at 7:01 PM
နောက်ဆုံးတခု သိထားသင့်တာက စင်္ကာပူအစိုးရဟာ မြန်မာအစိုးရလိုဘဲ မီဒီယာအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာပါဘဲ။ စထရိတ်တိုင်းမ်စ်နဲ့တကွသော သတင်းစာတွေ၊ တီဗီတွေ အားလုံးဟာ အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Media Development Authorities ဆိုတဲ့ ဆင်ဆာကြီးရှိနေတယ်။ အစိုးရကို ဝေဖန်တဲ့ အသံတွေ ထွက်မလာစေရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေကို အသေနှိပ်ကွပ်ထားတယ်။ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား လုပ်ပြီး လူတွေကို ဘရိန်းဝပ်ရှ် လုပ်ထားတဲ့အတွက် အတော်များများက စင်္ကာပူအစိုးရကို ထိုက်သင့်တာထက် ပိုပြီး အထင်ကြီးကြလေ့ရှိပါတယ်။ ဘီဘီစီတို့ စီအင်အင်န်တို့က အစ ဒီမှာ စတားဟတ်ဘ် ကနေတဆင့် လွှင့်ရတာပါ။ သတင်းဆင်ဆာရှိပါတယ်။ နောက်တခုက စင်္ကာပူထဲမှာ ရောင်းတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ အစိုးရကို ဝေဖန်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ပါလာရင် ရောင်းခွင့် ပိတ်ပင်ရုံမက တရားရုံးမှာ အသရေပျက်မှုနဲ့ တရားစွဲပါသေးတယ်။ စင်္ကာပူက တရားရုံးတွေဟာ အဲသည်လို အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေမှာ လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ နိုင်ငံတကာက လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက သိကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ အင်တာနက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် ပီအေပီအစိုးရရဲ့ သတင်းထိန်းချုပ်မှုဟာ အထိုက်အလျောက် ကျဆုံးစတော့ ပြုလာပါပြီ။ အလားတူ စင်္ကာပူလူမျိုးတွေလည်း မျက်စိပွင့်စပြုလာပါပြီ။ ဒီတော့ သူတို့စစ်တမ်းတွေအရ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ထက်ဝက်လောက်က အခြေအနေပေးရင် နိုင်ငံခြားကို အပြီးထွက်သွားချင်နေကြပြီ။ ကျန်တဲ့ ထက်ဝက်လောက်ကလည်း ထွက်ဖို့ အခြေအနေမပေးတဲ့လူတွေရယ်၊ အဆီအနှစ်စားနေရတဲ့ လူတွေရယ်၊ ဘရိန်းဝပ်ရှ် အလုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေရယ်၊ အခုလို မြန်မာလူမျိုးကနေ စီတီဇင်ပြောင်းခံလိုက်တဲ့ လူတွေရယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေကို စီတီဇင်အဖြစ် ရလိုက်တဲ့အတွက်တော့ စင်္ကာပူအစိုးရအတွက် အမြတ်တွေချည်းပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ဘဏ္ဍာငွေတွေနဲ့ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးလိုက်သူတွေကို သူတို့က စီတီဇင်အဖြစ် အခန့်သားရလိုက်တာကိုး။ ဒါပေမယ့် တဖက်ကလည်း ဒီလူတွေဟာ အခွင့်အရေး အကျိုးအမြတ်ကိုလိုလို့ ပြောင်းလာကြသူတွေဆိုတော့ အရေးအကြောင်းဆိုရင် ဘယ်သူမှ အားကိုးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်ပြေးကြမယ့် လူတွေချည်းပဲ။ ဒီတော့ နောက်ဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင် စင်္ကာပူမှာ ကျန်ခဲ့မယ့်လူအမျိုးအစားတွေက နိုင်ငံခြားကို မထွက်နိုင်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေ၊ အဆီအနှစ်ကို စားနေရတဲ့ လူတန်းစားတွေ၊ အခွင့်အရေးကို လိုချင်လို့ ပြောင်းလာကြတဲ့ အခွင့်အရေးသမားတွေရယ်… အင်မတန် နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတရပ် ပေါ်ထွန်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးတရပ်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အင်မတန် ရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ဆင်းရဲတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသည်အခြေအနေက ရုန်းထွက်လိုသူ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ် စေတနာရှိသူက အများစုပါ။ သယံဇာတ ရင်းမြစ်လည်း ပေါများတာ အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ ဒီစနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုက်နိုင်ရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာ တချိန်က စင်္ကာပူထက်သာခဲ့သလို ပြန်သွားမှာပါ။ ကျနော့်အတွက်တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လက်ရှိစင်္ကာပူရဲ့ အနာဂတ်ထက် ၀င်းလက်ပါတယ်။ အာဏာရှင်မရှိတော့တာနဲ့ တပြိုင်နက် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ အင်မတန်နေချင့်စဖွယ်တိုင်းဖြစ်အဖြစ်ကို အမြန်ဆုံး ကူးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်နေပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ပြောင်းတာ ငရဲကျတာ မဟုတ်ဖူးလို့ ရေးတော့ တကယ်က စာကျန်ခဲ့လို့ပါ။ တကယ်က ငရဲကျတာ မဟုတ်သလို၊ နတ်ပြည်ရောက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
စင်္ကာပူဟာ ဒီမိုကရေစီ ကျလှပါချည်ရဲ့။ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့် ရလှပါချည်ရဲ့ နိုင်ငံလို့ တခါမှ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။ သူ့တို့ အစိုးရ လုပ်တာတွေမှာ မကြိုက်တာ အများအပြား ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် ဟိုချင်း တီးမားဆက် စီအီးအို ပြန်လုပ်တာ။ ဩဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီး စာရင်းမှာ နံပါတ်တက်လာတာ မျိုးက စိတ်ပျက်စရာပါ။
ပီအေပီကို မယုံစားပါဘူး။ စင်္ကာပူ လူငယ်ပိုင်းကလည်း အတိုင်အခံရှိသင့်တယ် ဆိုတာ လက်ခံလာကြပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ကြီးချုပ်နယ်မြေမှာ အတိုက်အခံက မဲ ၄၀% ရသွားတာ။ အယ်ဂျူးနီ ဂျီအာစီမှာ အတိုက်အခံ က နှာတဖျားလောက်နဲ့ ရှုံးသွားတာတွေ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ နောင် ၁၀ နှစ်မှာ အတိုက်အခံက နိုင်သွားရင်ရော။ စီပီအက်ဖ်နဲ့ အခြား စနစ်တွေကို ဖျက်ပစ်မှာလား။ ပိုကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမျိုးကိုတောင် မျှော်လို့ရပါသေးတယ်။
August 20, 2009 at 8:09 PM
Thanks Bro. Good Article.
August 20, 2009 at 8:17 PM
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီကိုလာတာ အလုပ် လာလုပ်တာပါ။ တကယ်က မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်တော်တို့မှာ သမာအာဇီဝနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း အခြေကျပြီးသားပါ။ နောက် ကလေး ပညာရေးဆိုပြီး ဒီကို မိသားစု ပြောင်းဖြစ်တာပါ။ ၂၀ဝ၈ က မှပါ။ လူကြီးတွေ ပင်ပန်းပါတယ်။
ခု နိုင်ငံသား မပြောင်းခင် အများကြီး စဉ်းစားပါတယ်။ အဓိက စဉ်းစားမိတာက နောင် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးလို ဖြစ်တယ်ထား။ ကျွန်တော့် ကလေးတွေက ပါချင်တယ်။ တားမလား - ဘယ်လိုလုပ်တား မလဲ။ အားပေးမလား - ကိုယ့်ကလေးတော့ မတရား အသတ် မခံချင်တာ အမှန်ပါ။
ဒီမှာ ၁၀ နှစ်နေမလား။ အနှစ် ၂၀ နေမလား။ ဘယ်အချိန်ကျ ပြန်ရမလည်း။ ကိုပေါရော ဘယ်တော့ ပြန်မလည်း၊ နောင် ၁၀ နှစ်လား၊ အနှစ် ၂၀ လား။ အာဏာရှင် အစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးရင် မြန်မာပြည်ဟာ အရှေ့တောင် အာရှမှာ၊ ထိပ်တန်းဖြစ်မယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ တနင်္သာရီမှာ တူးမြောင်းဖောက်လိုက်ရင် စင်္ကာပူ ထိုင်ငိုရမယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး အနာဂတ်မှာ လင်းလက်အောင်မြင် လာမှ ပြန်ကျမှာလား။ သာယာစီးတယ် ပြောချင်ပြော အဲဒီ အချိန်ကျ ကျွန်တော်ရော ပြန်လို့ ရပါမှာလား။ နိုင်ငံသား မပြောင်းပေမယ့် အဲဒီ အချိန်ကျမှ ပြန်ရင်ရော ..
August 20, 2009 at 8:23 PM
ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားပြောင်းတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ ပြောင်းပါလို့ မတိုက်တွန်းဖူးပါ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်က လူတဝက်လောက် ပြောင်းသွားကြပါတယ်။ အဲဒါဆို တဝက်လောက်က မပြောင်းဘူးလို့ ပြောလို့ရတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် သတင်းအချက်အလက် ပေးတဲ့နေရာမှာ မကောင်းတာတွေချည်း ပြောနေမယ့် အစား၊ ဘယ်ဟာကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာ မကောင်းဘူးဆိုတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အခြားတဖက်က အမြင်နဲ့ ပြောပြဖြစ်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို လိုချင်လို့ ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို သေချာပျိုးထောင်ပေးပါတယ်။ (ကုန်ကျ စရိတ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခံရတာပေါ့။) ကလေးတွေကို ကျောင်းမှာ တနှစ်တခါ နား၊ မျက်စိကစပြီး စစ်ပေး။ အရပ်ပုနေရင် ကျန်းမာရေး ဌာနမှာ အကြံဥာဏ်ပေး။ ဝနေရင် ဝိတ်ချခိုင်း။ အားကစား၊ အနုပညာ စတာတွေ ကျောင်းမှာသင်ပေး။ ကောင်းမွန်တဲ့ စာကြည့်တိုက် စနစ်ထားပေး။
အဲဒီလို ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို သေချာ မွေးမြူတဲ့ စနစ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံဟာ နေ့ချင်းညချင်း ကျဆုံးသွားမယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ကလေးတွေကို ဒီမှာ ကြီးပြင်းစေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
နောက်တနိုင်ငံ ရွှေ့ဖြစ်အုံးမလား ဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး။ (ခြံခုန်ဖူးတဲ့ နွား မဟုတ်လား ခင်ဗျာ။)
Hi Cohtet, who told you that other countries would accept you when you grow too much older? No country in the world would accept old people as their new citizens. How can you be so sure that Myanmar will accept you back as her citizen once you abandon your citizenship. You may only haveachance to live in some countries witharetirement scheme if you are rich enough. Even to do so, you need to beacitizen of one country. If you don’t give up Singapore Citizen, you won’t get your CPF back. Just sharing my thoughts!!
စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားတွေ တကိုယ်ကောင်း ဆန်တယ်။ တာဝန်ရှောင်တယ် ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက ဒီလိုပဲလား။
ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတာလေး ပြောပြပါမယ်။ နာဂစ်တုန်းက မြန်မာသံရုံးကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ စင်္ကာပူ ကြက်ခြေနီက အမဝ၀ကြီး တယောက်လည်း ရောက်နေပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်သွား စပ်စုကြည့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဗီဇာ စောင့်နေတာတဲ့။ မနေ့က တနေ့လုံး စောင့်နေတာ။ သူ့အဖွဲ့က လေဆိပ်မှာ စောင့်နေတယ်။ ဒီနေ့ မရရင် မဖြစ်ဖူးတဲ့။ သူက ထိုင်ပြီးစောင့်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁၁ နာရီလောက်မှ ဗီဇာရသွားတော့ ခုန်ပေါက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြေးတာပါပဲ။
အချုပ်ပြောရရင် ဒါတွေကောင်းတယ်၊ ဒါတွေမကောင်းဖူး ပြောပြပြီး ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ် စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက သူများတွေ နိုင်ငံသား ပြောင်းတယ်၊ ငါလည်း ပြောင်းမယ်လို့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ဒီလိုပဲ ငါတို့ကတော့ တသက်မပြောင်းဖူး ဆိုပြီးလည်း အကျိုးအပြစ် မကြည့်ပဲ မနေပါနဲ့။
ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်သိဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
August 20, 2009 at 8:43 PM
shote par tal kwar. SG ko ngar doe Myanmar Pyi lote lite ya aung. Naw.
Notice that this article drawn more attention and more participate then မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး.
August 20, 2009 at 10:53 PM
cohtet စကားကို လက်ခံသူ said...
မြန်မာ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး.... မြန်မာပြည်ကိုချစ်တယ် မချစ်ဘူး.... ဘယ်သူမှသိဘို့မလိုပါ.... ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိရင်လုံလောက်ပါပြီ.....
ငါမြန်မာကွလို့ကြွေးကြော်နေသူများလဲ ခုချက်ချင်း ပြည်တွင်းပြန်ပြီး မြန်မာရှေ့ရေးကို မြေလှန်နိုင်သူတွေလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ဖင်ဂေါင်းကျယ်နေကြတာပါ......
အထင်ကို မကြီး တာပါ......
August 21, 2009 at 12:14 AM
ကျနော်ကတော့ cohtet ပြောတာလက်ခံပါတယ်။
ကျနော်စင်္ကာပူမှာနေသူ မဟုတ်ပေမဲ့ ..ကျနော် စုံစမ်းကြည့်ပါတယ်
ပထမတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းများစွာအတွက် စိတ်ပူလို့ပါ။ နောက်ကျတော့ ကွာခြားတဲ့ အချက်တော်၂များကိုသိပီး ကျနော်cohtet ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။
စလုံးနိုင်ငံသားခံခြင်း မခံခြင်းက နောက်ခံအကြောင်းတွေ တူချင်မှတူပါမယ်။
ဒါကို မင်းတို့က ၀င်တာ နိုင်ငံကို မချစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ကဲ နိုင်ငံကို ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ .. စလုံးနိုင်ငံသားမခံဘူး..။ အိုကေ..ဒါဆိုလဲ အမိမြေကို အခုပြန်ကြပါလား။
ကျနော် ပြောချင်တာက နိုင်ငံခြားမှာနေ နိုင်ငံသားခံထားတိုင်း အမိမြေကို မချစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ သားသမီး နောင်ရေးတွေ က ပညာရေးကို လိုလားတဲ မိဘတွေ ပို အလေးထားတာ ခင်ဗျားလဲ ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ သတိချပ်မိပါစေ..။
August 21, 2009 at 12:26 AM
ဟုတ်တယ်... ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စလုံးပြောင်းဘို့ စဉ်းစားနေသူတွေ ဘယ်လောက် များနေပြီလဲ ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့..... မြန်မာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကို လဲ အယုံကြည် မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီလေ.....
cohtet စကားကို လက်ခံသူသို့။။။။။
သစ္စာဖောက်ပြီး ကိုယ်လွတ်၇ုန်းပြေးသူတွေထက် စင်ကာပူမှာနေပြီး မြန်မာ့အေ၇းလှုပ်၇ှား နေသူတွေက အများကြီးသာပါတယ်။ မတူမတန် မနှိုင်းပါနဲ့။။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် စလုံးခံသွားသူတွေဟာ မိဘက ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့နဲ့ လူလားမြောက်အောင်ပညာသင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျမှ မိဘကို လုံးလုံး ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘဲ ကလေးမရှိတဲ့ သူဌေးက မွေးစားတာကို အပြီးခံလိုက်တဲ့ မသိတတ်တဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ တူပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိကြပါ။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကလည်း မင်းတို့လို အချောင်နှိုက်တွေကို ကြိုက်တယ်ထင်နေလို့လား။ မင်းတို့ကို ဆေးဖော်ကြောဖက်မလုပ်လို့ မင်းတို့ပထွေး လီကွမ်းယူကိုယ်တိုင် အသစ်ဝင်လာသူတွေကို ဆေးဖော်ကြောဖက်လုပ်ဖို့ ၀င်ပြောနေ၇တာ သဘောပေါက်။
Hote pa kwar.
_uck cohtet , _uck cohtet စကားကို လက်ခံသူ,
_uck မျှတစွာမြင်သူ, _uck လက်တွေမှာ.
You all want to hear what you did is right! Right?
Ok I will say so. You are right! You are right! Asshole!. Kiss Singparoe Ass. You are right!
Blother, we converted one ..same same ah!
We all talk talk until our sliver come out readyyy..you know!
But nebermine lah hor…..we outside ..suka suka ..can readyyy lah!
We always only see outside ah..outside ok…then ok lah!
This country ah….outside many many make-up lae`..so we impress lor..good wat!
Inside got urine-line ah ...nebermine..we outside suka suka..can readyyyy lah!
People talk ah..what!
humanright lah..freedom lah..bread and butter issue lah..
No use wat! we not interested.We only interested our family wat! All these ah..our gurmen will do..Ah-yo!..no worry lah!
Our gurman ah know everything one....they know more than god know lah..you see..so why worry.
I knowalittle bit only lor..
I know ”human-rice” lah..
I know ”freebies” lah..
I know “breast and bottom issue” only lah.(.joke ah joke :))))
Politic hor..tell you...don’t talk ..just swallow swallow..then ok ready lah..otherwise ah..you vomit blood lor.
No plorblem, right?..we outside suka suka can alreadyyy lah!
We bored ah..can go Gaylang also.Nice wat! I know you naughty lah..now you think something , correct or not?
I go Gaylang ah..just see here..see there..eat durian only lah!
Solly hor..This one ah..belly expensive..converted one ah, cannot afford lah…cannot...cannot ..we need save our money for our orlane age lah hor..Thruee!
Ok lah ..Ok lah..No plorblem lah..we ah..outside suka suka can already lah!
hahahahaha.. yee ya tal byar. Agree.
ta kae . Vomit blood so te` luu zar twey.
dar lae kyite tal bya.
စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကလည်း မင်းတို့လို အချောင်နှိုက်တွေကို ကြိုက်တယ်ထင်နေလို့လား။ မင်းတို့ကို ဆေးဖော်ကြောဖက်မလုပ်လို့ မင်းတို့ပထွေး လီကွမ်းယူကိုယ်တိုင် အသစ်ဝင်လာသူတွေကို ဆေးဖော်ကြောဖက်လုပ်ဖို့ ၀င်ပြောနေ၇တာ သဘောပေါက်။
တကယ်တော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဓိက (၀င်ငွေ)ကြောင့် ခန ချန်ခဲ့ရပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာပဲ ခေါင်းချချင်ကြမှာပါ။ ဒီတော့ အကျိုးအမြတ်တွက်ပြီး second citizen အဖြစ် ပြောင်းရတာ မျက်နှာငယ်ပါတယ်။ double tax ကလည်း ကိုယ်ဒီမှာရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မပြောပလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ (ကိုယ့်သားသမီး ပိုကောင်းစားရေး အတွက်၊ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကို သွားဖို့ capable မဖြစ်သူတွေ အတွက်၊ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအကျိုးအမြတ် ရတာပာာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သူတွေ အတွက်တော့ ) second citizen အဖြစ်ပြောင်းတာ အပြစ်မဆိုသာပါဘူးလေ။ နောက်မှ မြန်မာပြန်ပြောင်းရင်ပြောင်းပေါ့။ :P
I agree what သန့်စင် said...(August 19, 2009 8:55 PM) and "ဘောလုံးကွင်းထဲ...
and like what မျိုးချစ် said... "စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေကလည်း မင်းတို့လို အချောင်နှိုက်တွေကို ကြိုက်တယ်ထင်နေလို့လား။ မင်းတို့ကို ဆေးဖော်ကြောဖက်မလုပ်လို့ မင်းတို့ပထွေး လီကွမ်းယူကိုယ်တိုင် အသစ်ဝင်လာသူတွေကို ဆေးဖော်ကြောဖက်လုပ်ဖို့ ၀င်ပြောနေ၇တာ သဘောပေါက်။" :)
ကိုပေါရေ ဒီစလုံးမှာ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာ ဘယ်သူ ကအထင်ကြီးတာမှလဲ ခံချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ဘို့ဝေးလို့အားပေးဘို့ဝေးလို့ စိတ်ဝင်စားမှုတောင်မရှိတဲ့သူတွေ မသိတာ (အထင်မကြီးဘူးးပြောတာ) မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လဲသိတဲ့သူတွေ ကတော့ ဒိစလုံးမှာ က မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုဘဲ ပေးဆပ်ရမှုတွေ အန္တရယ်တွေ စွန်စားရမှုတွေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ (ဘ၀ တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိ) ရှိတာ သိကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုလည်းလေးစားရပါတယ်။
ကိုထက်ပြောတာ ထောက်ခံသူတို့ လို ကိုယ်ဘ၀ကိုယ့် ၀န်းကျင်ကွက်ကွက်လေး ကိုဘဲ တွေးတဲ့သူ ရှိသလို မြင့်မြတ်သော ခေါင်းဆောင်များ လဲ မြန်မာတို့သွေးထဲမှာ ရှိတာ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာ ကတောင်သိပါတယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် စလုံးခံ ဘို့စဉ်းစားကြတဲ့အထဲမှာ အိ်မ်ဂရန့် ရတာတို့ lift upgrading ပေးရတာတို့ တွက်ကြတော့ အိမ်နီးချင်း မြန်မာမိသားစု ကတော့ စလုံး မလုပ်ချင်တော့ လှေခါးဘိုးဘဲအေးအေးဆေးဆေးပေးလိုက်တယ်။ဂရန့်တွေ လှေခါး ပြင်ခတွေ ကလဲ အရစ်နဲ့ဆိုတော့ မသိသာပါဘူး။
ကျမ ကတော့ စလုံးမလုပ်ချင်တာ ပိုက်ဆံများများမရှိလို့ပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ ယူတဲ့သူတွေ က တော်တော် ငွေ ရှိကြတာဘဲ ထင်နေမိတယ်။
August 21, 2009 at 11:08 AM
SG ASS KISSER said...
Agree! Thu Thu. I agree!
But ခွင့်လွတ် သင့်တယ်။ တွေးမိလို့ ပါ။ အဲဒီ vomit blood တွေက အိုနာကျိုးကန်းစပြုနေတဲ့
သူတွေပဲ ဖြစ်ရမယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုလည်း အပေါ်ယံ၊ ထားပါ လေကြီးမိုးကြီး မပြောသေး
ပါဘူး။ ကိုယ့်သားသမီး ပိုကောင်းစားရေး အတွက်၊ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကို သွားဖို့
capable က မဖြစ်။ Coward ကလည်းဖြစ် နေမှာပေါ့။ အားလုံး အိုသေရမှာပါပဲ။ မအိုခင်စပ်ကြား
လေးတော့ ချေးပုံကို မြင့်မိုရ်အမှတ်နဲ့vomit blood အိုကြီးအိုမ (or) အဖြစ်မရှိ “cohtet”, “cohtet စကားကို လက်ခံသူ”, ”မျှတစွာမြင်သူ”, “လက်တွေမှာ”. တို့ လို တွယ်ကုတ် မနေချင်ပါဘူး။
August 21, 2009 at 11:16 AM
"ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကို သွားဖို့ capable မဖြစ်သူတွေ အတွက်၊ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအကျိုးအမြတ် ရတာပာာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သူတွေ အတွက်တော့"
ပြောချင်တာက အခြား အမေဂျီးကန် စတဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားနိုင်ရန်။ စလုံးထက် ပိုအကျိုးအမြတ်ရှိရင်တော့ သွားကြဟေ့ လို့ ပြောချင်တာလား ခင်ဗျာ :)
August 21, 2009 at 11:29 AM
Thauk phyit ma shi te` thu twe pae` salone khan tal lo...yay lite par taut lar... SG ASS KISSER yal. ta kae pae`.
bwin bwin shin shin thar pyaw hte` lite.
August 21, 2009 at 11:31 AM
Anonymous August 21, 2009 11:29 AM
hote tal, thwar thint yin thwar he`. nint pa htwe sg phin pae` kiss ma nay ne` lo pyaw tar.
khu law law hse`nin ka myanmar pyi pyan chin tar lar? ngar khauk lite ya. thuak thone ma kya te` kg ne` taut khet par pi. lay gyi phin kyae..tine pyiakyaung lar ma pyaw ne` ohn. nint bawa ninayin brush up lote ohn. la da.
To Anonymous August 21, 2009 11:29 AM,
တချို့တွေက citizen ခံလို့ ဘယ်လောက် အကျိုးရှိတယ် ဆိုတာ တွက်ပြနေလို့၊ ကိုယ့်မှာ အရည်အချင်း ရှိရင် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာ ကို သွားလို့ရတယ်။ ကိုယ့် မိခင် citizen ကို စွန့်စရာ မလိုပါဘူး။
August 21, 2009 at 11:56 AM
အမေဂျီးကန်လို နိုင်ငံသား ကဒ်စိမ်းလေးယူ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား မစွန့်တာကို ပြောတာလား။ မြန်မာ လဝက မှာလည်း ၂ နိုင်ငံသား ခံခွင့် မရှိဘူး ခင်ဗျ။ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးပါပဲ။ မြန်မာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်တာ ပိုသေး။
August 21, 2009 at 12:12 PM
Anonymous "August 21, 2009 12:07 PM" သို့။
အတန်းထဲက သူတွေအားလုံး ညံ့တာပေါ့နော်။ ဘယ်ကျောင်း၊ဘယ်အတန်း လဲမသိဘူး၊ :D
Ah la mak, my "once uponatime Bother"( I already converted mah..solly hor ..cannot call you " Brother" anymore )..
think properly lah!
All "true blue one" ah..they all migrate to canada, ausi,newzeland,US already lah..you don't know meh`?
We only "converted one with big big heart" ah..left only just to " hlae` kyooe thuun" ( i mean carry broken cart, understand ah? ).
We all happy happy "hlae` kyooe thuun" ah..Ok already lor.
August 21, 2009 at 2:22 PM
Solly ..my spelling mistake ah..I mean "once uponatime Brother".
အချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုလို့ ...မြန်မာပြည်ကို ချစ်ရက်သားနဲ့ ဆင်းရဲလို့ မတိုးတက်လို့စလုံးပြောင်းတာဆိုရင် ... ဆင်းရဲသားမြန်မာပြည်လေးကို ပစ်ပြီး သူဌေးသား စလုံးသားကို ဈေးတွက်တွက်ပြီး လက်ထပ်တာနဲ့ တူပါတယ်... မြန်မာပြည်တိုးတက်ရင် ချမ်းသာသွားရင် ပြန်လာဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုသူတွေက သူဌေးသားစလုံးကို ကွာပြီး ငယ်ချစ်လေး မြန်မာပြည်သား ပြန်ပေါင်းမှာနဲ့တူပါတယ်.. wondering..ငယ်ချစ်ကလေးက လက်ခံချင်ပါ့မလား
August 21, 2009 at 2:35 PM
August 21, 2009 at 2:37 PM
ဆင်းရဲလို့ မတိုးတက်လို့ မဟုတ်ဘူးဗျို့။ အဲဒီ မြန်မာပြည်လေးကို ချောက်ထဲကနေ မလွှဲသာ မရှောင်သာ ကယ်ထားကြတဲ့ မြန်မာပြည်လေးရဲ့ ပထွေးတွေ ကြောင့်ဗျို့။
Out of topic. We are not discussing about this.
"Mg Naing said...
အချစ်မပါတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုလို့ ...မြန်မာပြည်ကို ချစ်ရက်သားနဲ့ ဆင်းရဲလို့ မတိုးတက်လို့စလုံးပြောင်းတာဆိုရင် ... ဆင်းရဲသားမြန်မာပြည်လေးကို ပစ်ပြီး သူဌေးသား စလုံးသားကို ဈေးတွက်တွက်ပြီး လက်ထပ်တာနဲ့ တူပါတယ်... မြန်မာပြည်တိုးတက်ရင် ချမ်းသာသွားရင် ပြန်လာဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုသူတွေက သူဌေးသားစလုံးကို ကွာပြီး ငယ်ချစ်လေး မြန်မာပြည်သား ပြန်ပေါင်းမှာနဲ့တူပါတယ်.. wondering..ငယ်ချစ်ကလေးက လက်ခံချင်ပါ့မလား"
Lan Thit..where are you now? Try to be dutiful. Now is your section already. :))))))))
စလုံးမပြောင်းဘဲ .. ဆင်းရဲသားမြန်မာပြည်လေးကို ပစ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြားမှာသွားနေ .. အသက်ကြီးလို့ မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်မှ ပြန်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ သူဌေးသားနဲ့ LT သွားနေသလိုပဲပေါ့နော် ..
How come Mg Naing's comment is out of the topic? It is still valid according to the topic.
You don't know meh? Ah la ma.
:))))))))))) Like it. Let me post it again. Anonymous August 21, 2009 10:07 AM
ငယ်ရွယ် ပျိုမြစ်တုန်းမှာတော့ ဆင်းရဲသားလေး မြန်မာပြည်ကို ပစ်ပြီး သူဌေးသား စင်္ကာပူလေးနဲ့ သွားပြီး လေးဘီးတူဂဲသား (Living Together) နေပြီး အိုမင်းရွတ်တွ ကာမှ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး ငယ်ချစ်ကလေးနဲ့ ပြန်ပေါင်းပါရစေဆိုပြီး ပြန်လာရင် ဆင်းရဲသားမြန်မာပြည်လေးက စလိုးမိုးရှင်းလေးနဲ့ ပြေးပြီး “မှတ်မိပါတယ်… အသက်ရေ… ငယ်က ကျွမ်းတဲ့…. ငယ်ကျွမ်း…အမ်..အမ်း…ဆွေ” ဆိုပြီး ပြေးဖက်ရမှာလား။ အဟင့်… ရင်နာလိုက်တာ… အသက်ရယ်..။
အတူး ! my love. Let's go back now. :(
အတူး ! my love. We can do like him also. lol.
"SG ASS KISSER said...
လေးတော့ ချေးပုံကို မြင့်မိုရ်အမှတ်နဲ့vomit blood အိုကြီးအိုမ (or) အဖြစ်မရှိ “cohtet”, “cohtet စကားကို လက်ခံသူ”, ”မျှတစွာမြင်သူ”, “လက်တွေမှာ”. တို့ လို တွယ်ကုတ် မနေချင်ပါဘူး။"
အသက်ကြီးမှ မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်မှ ပြန်မယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲ.. မြန်မာ နိုင်ငံသားကို မစွန်လွတ်သရွေ့ရှာသမျှဝင်ငွေတွေ.. တတ်ထားတဲ့ အတွေ့ အကြုံ ပညာတွေ အားလုံးဟာ.. မြန်မာပြည်အတွက်ပါ.. နိုင်ငံသား စွန့် လွတ်သွားပြီ.. ဆိုရင်တော့ အခုလို ဘေးထိုင်ဘုပြော ရုံလွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ.. ၀မ်းနည်းပါတယ်.
After read all those rubbish debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion and also rude to others) and I understand more why mm miitary junta said that his countries people are still not suitable with democracy. So those one sided and narrow minded are still have to live under military rules at least net 20 years.
Burmese people said...
Thanks for understanding and supporting the dictators while looking down upon the oppressed people by the junta.
August 21, 2009 at 7:56 PM
After read all those rubbish debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion and also rude to others) and I understand more why mm miitary junta said that his countries people are still not suitable with democracy. So those one sided and narrow minded are still have to live under military rules at least next 20 years. May be more than that. Those guys may become like swan arr shin and/or kyan phutt whan military offers them some peanuts.
The world is becomes likeavillage in this age. Most of developed countrie people are going East to West and Noth to South. Many european/american people come and stay in east and also many asian people go and settle there too. Brain drain but later become brain gain when see by clever governments. What are the rubbish talks by some people here. It is depen on you all wherever you stay. Depend what you can do and what abaility you have.
ကျနော် မရှင်းတာလေး မေးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားတဲ့ ယခင်မြန်မာနိုင်ငံသား တချို့က တစ်နေ့ကျရင် စင်ကာပူကခွာပြီး "အမိနိုင်ငံ" (cohtet ကတော့ "ကိုယ့်နိုင်ငံ" လို့ ပြောပါတယ်။) ဆီကို ပြန်ချင်ပြန်မယ်လို့ ပြောတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီ အမိနိုင်ငံဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံကိုပြောတာလဲ ခင်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အမိနိုင်ငံဟာ စင်ကာပူနိုင်ငံသာဖြစ်တယ် လို့ပဲ သိထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ စင်ကာပူက ခွာပြီး စင်ကာပူဆီ ပြန်လို့ ရနိုင်ပါ့မလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက်သာ အမိနိုင်ငံပါ။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသား ပြောင်းပြီးသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မယ် ဆိုရင်တော့ မွေးရပ်မြေဆီပြန်မယ်လို့ ပြောမှ မှန်မှာပါ။ နောက်တနည်း အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်မယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ပြောထားသလို အဲဒီအချိန်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပါ စွန့်မှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရှာထွက်မယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ရှာလို့ တွေ့မတွေ့ ဆိုတာကတော့ နောက်ကိစ္စပေါ့ဗျာ။
ကျနော် ဒီစာကို ရေးတာ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ခံယူသွားသူတွေကို မှားတယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူး၊ နိုင်ငံမချစ်ဘူး၊ ကျေးဇူးကန်းတယ် စသည်ဖြင့် ဝေဖန်ချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်းတာ မပြောင်းတာမှာ ဘယ်ဟာက မှန်တယ် ဆိုပြီးတော့လည်း မဆွေးနွေးချင်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို နိုင်ငံသားပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါ လူ့အခွင့်အရေး တစ်ခုပါ။ ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိသလို ဘယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် တခြားနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပြောင်းမယ့်နိုင်ငံက ကိုယ့်ကိုလက်ခံဖို့သာ အဓိကပါ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်ရှင်းပြဖို့ မလိုသလို ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာမဟုတ်ရင် ဘာမှလည်း စောဒကတက်စရာ မလိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ပြောင်းသွားသူတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံဟာ ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်တယ် ဆိုတာရယ်၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်နိုင်ငံကသာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေ ပေးတယ် ဆိုတာရယ်၊ နိုင်ငံသားဆိုတာ စွန့်ပြီးရင် အလွယ်တကူ ပြန်မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ လက်တွေ့အမှန်တွေကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့၊ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေဖြစ်လို့ ဆိုတာတွေကြောင့်မှ မဟုတ်ပဲ ချစ်ချင်ရင် ဘယ်လူမျိုး ဘယ်နိုင်ငံသား မဆို ချစ်မှာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်နေတိုင်းလည်း ချစ်ချင်မှ ချစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသား ပြောင်းသွားသူတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ချင်ရင် ဆက်ချစ်ပါ။ ချစ်လို့ရသလို တော်တော်များများလည်း ချစ်နေဆဲဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား အခွင့်အရေးတွေကို ပြန်ရဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် ပြန်လည် အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ ဆိုတာတွေကို အလွယ်တကူ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ မဟုတ်ရင် စိတ်ဆင်းရဲရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လောက် ချစ်ချစ်၊ ခေတ် ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ လက်တွေ့အမှန်ပါ။
အချုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့ မစွန့်နိုင်ရင် မပြောင်းပါနဲ့။ စွန့်နိုင်လို့ ပြောင်းပြီးသွားရင်လည်း တဖန်ရဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ သီချင်းထဲကလို "စွန့်၍ ချစ်သွားမယ်" ဆိုလည်း စောဒကမတက်ပါဘူး။ နိုင်ငံသားပြန်ဖြစ်ဖို့ အတွက်တော့ ၀ိုင်ဝိုင်း သီချင်းထဲကလို "မေ့လိုက်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့" လို့ပဲ ပြောပါရစေ ဗျာ။
August 21, 2009 at 8:35 PM
When you become adult, married and live with your own family mean you are not betray your family. You parents will not think you no more loving them and they will not let you abandon too (if they are gentle parents). You will go and visit to your parents too and take care them whatever you can and whatever they need (if you are gentle guy). Your parent will say that you are no more their son and you are husband of other's family's daughter? i don't think so.
August 21, 2009 at 9:12 PM
After reading KP@Philippines' last comment, I only want to quote his own words, i.e,
"....debates by those one sided (only want to say what they want, can't understand what other opinion...."
You are now exactly behaving like that. ;p
I stand with my points and just debates to those and not rude to others. What I means to those guys are they cant fairly debate and just made rude to their oppositation.
ကျေးဇူးအထူးပါပဲ ကိုမျိုးမြင့်မောင်ရေ။ ခုလို ထောက်ပြတာ။
နောက်တခု မေးချင်တာက နိုင်ငံသားပြောင်းသွားတဲ့ သူအများစုက မိသားစုမှာ တယောက် ချန်ထားတတ်ကြတယ်။ (အများစုက ဇနီး။) အဲဒါကိုရော ဘယ်လို သဘောရပါ သလဲ။ ကိုပေါ သဘောထားကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
ကိုကေပီ ပြောတာကို တခုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပဲ ထိုက်တန်တယ် ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည် မရှိပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင် စနစ်မြဲနေတာ နင်တို့ကြောင့်လို့ ပြည်သူကို အပြစ်တင်လို့လည်း မရပါဘူး။
Kp@Philippines ရေ စာအုပ်စာပေ များများ ဖတ်အုံး။ တကယ့်ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက် နေတာတွေကိုလည်း အရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်း သုံးသပ်အုံးပေါ့။ rude တယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့နော်၊ ဒီက ဒဲ့ပဲ ပြောတတ်လို့ပါ။
ပြောတော့မယ်နော်၊ The world is becomes likeavillage in this age. ဒီစာကြောင်းလေးက ဘယ် essay ထဲကလဲ။ ဘဝအကြောင်းမသိတဲ့ essay တွေပဲကျက်နေရတဲ့ ကျောင်းသားလေးဆိုရင် တော့လည်း နားလည်ပေးပါ့မယ်။
August 21, 2009 at 11:55 PM
cohtet ကျနော့်သဘောကတော့ မဆိုးပါဘူး၊ ကောင်းသားပဲလို့ ထောက်ခံပါတယ်
အကို့ ကို။ အကိုကျေနပ်တော့နော်။
August 22, 2009 at 12:07 AM
My view only said...
စလုံးသည် လက်ရှိအနေအထားတွင် အလုပ်လုပ်ရန်သင့်တော်သော workshop ဟုသတ်မှတ်သောကြောင့် အလုပ်လုပ်သည်။ အလုပ်လုပ်ပြီးပါက အထုပ်ပိုက် ထုခွဲရောင်းချအိမ်ပြန်ပြီး အမေ့ကိုအပ်ရုံသာရှိပါသည်။ အလုပ်ရုံတွင် အိမ်လို မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှ မနေနိုင်ပါခင်ဗျာ.. အမေမျှော်နေပါတယ်.. အမေ ဒို့ တွေရဲ့ စောက်ရှောက်မှု့ လိုနေပါတယ်..
August 22, 2009 at 12:49 AM
ငိုချင်လာတယ်ဗျား အမေ့မျက်နှာ မျက်စိထဲမှာမြင်ပီး။
August 22, 2009 at 12:59 AM
WE SHALL SEE...... OH MY BURMA AND HER SHOUT OUT LOUD SONS......
YOU ARE NATOs....... NO ACTION TALK ONLY....
ငပေါက သူ့ဘက်က လိုက်ပြီးဆဲပေးတဲ့ကောင်ဆို ဘယ်တော့မှ မကြိမ်းမောင်းဘူးဟေ့.... -----ီးဘဲ
August 22, 2009 at 1:28 AM
August 22, 2009 at 1:29 AM
I never kiss Singaporeans ass..... they are kneeing down in front of me.... in such case ,how about this..?..... ha ha..
depend on your intelligent men..... :P :P :P
August 22, 2009 at 1:34 AM
အကို ပြောတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကတော့ ဆွဲရေးရင် ရေးသလောက် များနိုင်တာမို့ မပြောတော့ပါဘူး။
မိန်းမနောက် လိုက်နေရုံနဲ့တော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိန်းမမိဘတွေရဲ့ တရားဝင်မွေးစားသားအဖြစ် ခံယူဖို့အတွက် ကိုယ့်မိဘကို သားအဖြစ် တရားဝင် စွန့်လွှတ်ခိုင်းထားပြီးမှ နောင်တစ်ချိန်မှာ အမွေလာတောင်းလို့တော့ မရဘူးပေါ့ ဗျာ။
August 22, 2009 at 1:43 AM
Anonymous @ August 22, 2009 1:29 AM
ပြောင်းချင်ပြောင်းပေါ့။ သောက်ဂရု မစိုက်ဘူး။
ကျနော်လာလည်ပါတယ်။ကျနော် ၁၉၉၆ တုန်းက နိင်ငံတခုမှာခိုလှုံခွင့်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှိင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ တော့ စိတ်ကူးလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ စာတွေ ဖတ်တော့ ပိုပြီတော့ သခါင်္န်းစာရမိတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ ခိုလှုံခွင့်လေးတောင်မှ ကျနော်လက်လွတ်ခဲ့တာုကာပါပြီ။ စိတ်အားထက်သန်စွာ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရတော့ ကျနော် အားကျမိတယ်။
Hi မျိုးမြင့်မောင် ,
You might think that to those people who surrendered Myanmar citizenship and converted to Singaporean will be come back to Myanmar to their downtime when they can't live and survive in Singapore or somewhere? But based on my knowledge from others who are now Singaporeans, working in very professional fields with very income are still want to cotribute to Myanmar with their experience and knowledge when Myanmar escaped from military junta. What I can say is that professional working people can stay wherever in the world not only in Singapore. If Singapore becomes like what you all think also they can survise anywhere. Not necessary to go back to survive their live. What I trying to say is that those people are love to Myanmar like you all and ready to contribute when the time is come (don't think onlyအမွေလာတောင်း). Yes you may say that they are not doing anything now to get democracy in Myanmar or not contribute anything to those people who are fighting for democracy and opposition to military junta. Yes I proud for those people like you who fighting for freedom in Myanmar but sorry for not contributing this time depend on their own situation.
အမွေလာတောင်းလို့တော့ မရဘူးပေါ့ ဗျာ။
August 22, 2009 at 11:53 AM
I am glad said...
I am glad that SG got such kind of people. Bravo!!!
"I never kiss Singaporeans ass..... they are kneeing down in front of me"
So what? They pay you for this, is it?
It's your business here, right? Not bad ah!
August 22, 2009 at 12:38 PM
August 21, 2009 11:55 PM
Yes I don't think this is rude to me or others in this comments. (What I mean was to those ...
ငပေါက သူ့ဘက်က လိုက်ပြီးဆဲပေးတဲ့ကောင်ဆို ဘယ်တော့မှ မကြိမ်းမောင်းဘူးဟေ့.... -----ီးဘဲ)
August 22, 2009 1:28 AM
To reply your questions, you should clearly adivse me what you think wrong on me and what books I should read for that? Coz I like readings. You said that တကယ့်ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက် နေတာတွေကိုလည်း အရှိအတိုင်းအမှန်အတိုင်း သုံးသပ်အုံးပေါ့။ mean on which area? In political situation in Myanmar or what happening in this topic or ... ?
what I said "The world is becomes likeavillage in this age" is based on my experience. Bcoz I am travelling around asia pacific region countries for my professional jobs and also to western/eastern countries for my profession's trainings. So I felt like I said and it is my own though after seeing many countries people are going around the world for their works or study or whatever.
So, can you နားလည်ပေးပါ့မယ်။?
ဆဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တခု ပြောချင်ပါတယ်။ သူဆဲတာကတော့ ကျနော့်ကို ဆဲချင်တာပါ။း-)ရိုင်းတယ် ပြောချင်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ဘူး ဘာညာနဲ့ ပြောတာကတော့ နည်းလမ်းကျတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ စီအင်န်အန်တို့လို အထင်ကရ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာတောင် ကွန်မင့်ကဏ္ဍတွေမှာ သည်လိုပဲ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဆဲတဲ့ကွန်မင့်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံခြားဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကလည်း ဆဲတာတွေ့တာနဲ့ ဖျက်ပစ်လိုက်တာမျိုးဆိုတော့ မတွေ့တဲ့အခါလည်း မတွေ့ရဘူးပေါ့။
အခုဝင်ပြောရတာက ဆဲတာကို မှန်တယ်မှားတယ်ပြောချင်တာထက်....
အဲဒီ ဆဲတာ၊ ရိုင်းတာ တခုလေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်ဘူးလို့ မှတ်ချက်မချသင့်ဘူးလို့ ထောက်ပြချင်တာပါ။ ဘယ်လူမျိုးမဆို မွေးလာတာနဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လူမျိုးတွေချည်းပါပဲ။
Ko Bo Hein
Your thinking is absolutely right
I heard this internal news, this author must be from Stupid Junta Embassy, Because nowaday we can see everyday group of Myanmar PR surrender their passport at Embassy
They sure feel depression and disappointed about this case.
So they make it site war, media war and make it confuse to people.
all this case will be come out very soon,
please stop stupid spdc embassy.
thanks ko bo hein
August 22, 2009 at 1:38 PM
I think it is very cheap and too simplify to say that this letter is from SPDC.
If you are mature enough to differentiate between the facts and the propaganda filths, you won't be that desperate to justify your choice.
Don't be too desperate and just use your brain.
ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ Anonymous လုပ်လိုက် ဘိုဟိန်းလုပ်လိုက်နဲ့့ မျက်စိကိုနောက်နေတာပဲ...
ကဲ... ကဲ.... ခင်ဗျားစလုံးပြောင်းတာမှန်တယ်ဗျာ.. ကျေနပ်ပြီလား..ကဲ.. နားတော့ ... နားတော့...
August 22, 2009 at 2:25 PM
P1 student said...
ဦးဦးပေါလို့ ခေါ်လိုက်တာက တာတားက အခုမှ ၆ နှစ်သားပဲ ရှိပါသေးတယ်.. လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ P1 တတ်နေပါတယ်.. (ယုံမလားတော့မတိဘူးနော်) ဦးဦးတို့ ငြင်းနေတာတွေတွေ့ လို့ ဝင်ပြောပါရစေ..တားတားအတွက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်..PR နဲ့ နေရမလား.. စလုံးပြောင်းရမလား စဉ်းစားမလိုတော့ပါဘူး.. တားတား မိဘတွေကစလုံးပြောင်းပြီးသွားပါပြီ.. တားတားဆုံးဖြတ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး..
August 22, 2009 at 3:24 PM
တခြားနိုင်ငံသားတွေ နဲ့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်း ဆွေးနွေးကြရတာ ရီစရာကြီး.. စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများ ဒီလိုနေရာတွေ မှာ ၀င်ရေးမနေ ကြပါနဲ့တော့-
I know the guy ဆဲ to you in his comment. But that was blind ဆဲ to you. If he don't agree or like with your comments he can say what and why. But never say what his believe or opinion to you, never explain and he behaved like that. What I am trying to say here not ဆဲ only and mentality of all those guys in this topic.
I do agree with you that you said မှန်တယ်မှားတယ်ပြောချင်တာထက်....
I also never meant that. I just said what SPCD newspaper said to Myanmar people. Might be misunderstand with my early comments. What I meant was democracy will still far far away because of those type of mentality guys.
I also don't agree on some points what you said in your stories and I will try to write what I don't agree and what I think. So I can get back your idea on my thought. What I really want is fair game. Don't like one side talk like SPCD newspaper.
August 22, 2009 at 11:24 PM
စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများ ဒီ forum မှာပဲဆွေးနွေး ရင် ခင်ဗျား တို့အတွက်ပိုအကျိုး ရှိပါလိမ့်မယ်။ Be prepared!
i think ko paw , myo myint maung and his ball picking up group dont want to stay in singapore anymore
want to go back his beloved junta goverment county myanmar,
should give him bitter lesson and report everything to police so you will know when u go and extend your re entry permit, see how lor
better report to CID everything
bye bye ko paw
group, cohtet and ko bo hein
August 23, 2009 at 12:12 AM
Anonymous (August 23, 2009 12:12 AM)
ခင်ဗျားထင်သလို ဒီက စီအိုင်ဒီနဲ့ ကျနော်တို့က အစိမ်းသက်သက် ထင်လို့လား။ ကျနော်တို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်စစ်ပြီး ကျနော်တို့ အချက်အလက် စီအိုင်ဒီနဲ့ အိုင်စီအေမှာ ရှိပြီးသား။
ရီအင်ထရီ တိုးမပေးလဲ ဘာဖြစ်သလဲ။ ကျုပ်တို့က ခင်ဗျားတို့လို ဒီမှာ တသက်လုံး ဖက်တွယ်နေမယ့်သူတွေမဟုတ်။ အဲဒါမျိုးတွေးကြောက်နေရင် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံရေးတောင် မလုပ်ဘူး။း-)
ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့လို လူတွေအပေါ် စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ အကြောက်တရားလက်နက်က မထိရောက်ဘူး။ သူတို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ သူတို့ မတရားတာလုပ်ရင် အဲဒါနဲ့ ထိုက်တန်အောင် သူတို့ ပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျား ဖြုတ်ဦးနှောက် အကြံလောက်တော့ သနားတယ်ဗျာ။
August 23, 2009 at 12:36 AM
အဲနီးဝေး... ဒိဘလော့ဂါဆီမှာ တရားမျှတမှု မတွေ့ရပါ.... တော့ပစ်ရွေးတာတော့ တဖက်ကန်းခတ် ကျွမ်းတယ်...
August 23, 2009 at 3:05 AM
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း အပြည့်ပါလာတဲ့သူကို ငရဲက လာပေ့စေ.. ဘယ်နိုင်ငံကမှ မနှိမ်ပါဘူး....
ကိုယ့် အရည်ချင်း က အစစ်မှန်ဆိုရင်ပေါ့....
အဲလိုလုပ်တတ်တာ ကျနော်တို့ ဗမာတွေပါ....
"တခြားနိုင်ငံသားတွေ နဲ့ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်း ဆွေးနွေးကြရတာ ရီစရာကြီး.. စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများ ဒီလိုနေရာတွေ မှာ ၀င်ရေးမနေ ကြပါနဲ့တော့-"
ဂလိုကြီးလား ငပွေးရယ်။ စင်္ကာပူ နိုင်ငံအကြောင်း အားပါးတရ ဆွေးနွေးနေကြတာ မြင်တော့။ မြန်မာ နိုင်ငံအကြောင်းလည်း ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်ထင်မိလို့ပါ။ ဂလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။
ဂလိုကြီးပဲဗျာ.. စင်ကာပူ နိုင်ငံအကြောင်း ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး ရှေ့အလားအလာ စသည်ဖြင့်ပါ.. အခုကိစ္စက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အိမ်တွင်းရေးပါ.. ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီလိုကိစ္စမှာ တခြားနိုင်ငံသားတွေ ၀င်ရောက်စွတ်ဖက်တာ မကြိုက်ပါ. စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံယူတဲ့ ကိစ္စ မျိုးဆို ကျနော်တို့ အသေးစိတ် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး မည်မဟုတ်ပါ.. ဒီတော့ ဝေးဝေးကြီး မှာသွားနေလိုက်ပါ...
August 23, 2009 at 10:53 AM
u r the one having identity crisis. So what if I change my citizenship to Singapore or any other countries for that matter.. I can get dual citizenship or triple citizenship.. I don’t need to love or hate the country that Im having citizenship.. wake up Ko Paw!
Leave your 9th century thoughts and face the reality in 21st century.
August 23, 2009 at 12:13 PM
Ko Gaut's Thoughts! said...
what r u waiting for.. why don't u just pack up and leave the countries?
August 23, 2009 at 12:28 PM
ဟုတ်ပါ့ ကိုငပွေးရာ သူများအိမ်တွင်းေ၇းကို ဝင်စွက်ဖက်ချင်တဲ့သူတွေကို ပြောပြစ်လိုက်စမ်းဘာ-
"ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ၇ှိသည်" လို့
u ppl r really having identity crisis.. for many reasons, u have to makealiving in SG which is not according ur taste.. u hate ur life, even ur family, ur MM gov, and u hate SG gov for not building their country according ur taste..
u feel that u r better. but u r helpless, u can't go anywhere else.. if u do, u r takingagreat risk... u r leaving quite comfortably now..
for all those reasons, ur identity crisis was created..
August 23, 2009 at 12:59 PM
You are right! You are right!
နားတော့ ... နားတော့..နော်။
Mr Sa-lone said...
Your ariticle made us regret lah. So we angry lah. So we come back here again and again to prove we are right lah. Please lah...
Do you think Ko Paw & Myo Myint Maung Dare to Go back Myanmar if SG Govt not giving extension their Re-Entry Permit. They already find the way how to get Refugee to other countries. This why they are so daring. I really Hate SPDC at the same time I cannot see This two guys Ko Paw and Myo Myint Maung doing for Democracy. They are quite Proud of theirself and want to look down people. They only thought that Thy are Right at everytime. Like to urge with people. no explaination to those weaker people. Not like Ko Ko Gyi and Ko Min Ko Naing. especially Myo Myint Maung. Please remember that you cannot do alone without people. Don't make people hate you and no confidence on you.
August 23, 2009 at 4:42 PM
မောင်ဘိုဟိန်းနဲ့ အပေါင်းအပါများ ..
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စလုံးခံလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေပါ
စလုံး မခံနိုင်ရင် အိမ်ပြန်ဆိုပြီး လုပ်တာလား..
ခင်ဗျားတို့လုပ်တာ ကောင်းပါတယ် တယ်ပြောစေချင်ရင်..
သိပ်ကောင်း သိပ်မှန်ပါတယ် ကိုကိုစလုံးတို့ ရယ် လို့ ထပ် ပြောပေးပါမယ်..
တစ်ချို့ က Globalization နဲ့ Converting Citizenship ကို သေချာသဘောမပေါက်သေးဘူး..
ကိုယ်အမြီး ပျက်သလို သူများတွေပျက်စေချင်ရင်တော့ ဆက်ပြီး ရေးကြဦးပေါကွာ..(သတိ..မျောက် သစ်ကိုင်းလွတ်ဖြစ်ရင် ကြည့် မကောင်းဘူးနော်)
August 23, 2009 at 6:14 PM
I love your English. :P
U r the one having identity crisis. U r PR and u boughtapublic housing in Singapore.. U send ur daughter to public school in Singapore...
So what if I change my citizenship to Singapore or any other countries for that matter.. I can get dual citizenship or triple citizenship.. I don’t need to love or hate the country that Im having citizenship..
I'm still young.. I got my basic degree in Singapore.. I can climb the corporate ladder and make enough money before deciding where I shall grow old..
I can go any countries for my retirement... I can choose to stay in Singapore comfortably or choose Thailand, New Zealand, Ausi, any Mediterranean countries or Scandinavian countries..
My son will grow here.. be educated here at the best private (NOT PUBLIC) primary school, secondary school and junior college.. possibly getascholarship to study at ivy league university from US.. and serve Singapore asahigh ranking civil servant... or I will send him to the best ivy league.
If he decide that he don't want to stay in Singapore, he can always choose to leave SG for any other counties.. Employment opportunities will be abundant for somebody with such qualification.
He can becomeatrue global citizen.
Wake up Ng Paw!
စိတ်ချမ်းသာသလိုသာ ပြောခဲ့ပါ ကိုကို။ ခွိ ခွိ။
August 23, 2009 at 10:35 PM
Hla Htone said...
အဲဒါလေးတွေကြောင့် ကိုကို့ ကို အထင်ကြီးခဲ့ရတာလေ။ကမ္ဘာ အနှံ့ လျှောက်သွားမယ်နော် ကို။ ခွိ ခွိ...ခွိ ခွိ။
do u see?
August 23, 2009 at 11:09 PM
we need many ppl (enough critical mass for breakthrough) like him... do u understand wat i mean by 'critical mass'? if u don't understand, just forget abt it.
i only want to say open up ur narrow mind.. and see for the long run..
August 23, 2009 at 11:11 PM
ပြောင်းပြီးသားလူတွေ အပေါ်က စာလေးနဲ့ စိတ်ဖြေပေါ့..
August 24, 2009 at 12:08 AM
အဟင့်....မခံချင်အောင် သူပြောတယ် အမြဲ။
အိမ်း... ဘဝင်ရူးMg Goutတစ်ကောင်နဲ့တော့ ခက်တော့တာပဲ။ ချော့ချက်မောင်းထုတ်လည်း မရ၊ ချောက်ပီး မောင်းထုတ်လည်း မပြန်နဲ့ ကြည့်မရတော့ဘူး၊ ဆဲလိုက်တော့မယ်။ အတွေးအခေါ်လေး တစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ ဘဝင်ရူးရေ... သောက်ရူးလာထမနေနဲ့ ဒီမှာ။
August 24, 2009 at 12:24 AM
ကိုဂေါက် ပြောတဲ့လင့်က စင်ကာပူ အင်တာနေရှင်နယ် အာဘီထရေးရှင်း က CEO ပဲ အရမ်းလေးစားတယ်... ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေ အများကြီး လိုတယ်... ရှင်တို့ ဦးဏှောက် တထွာလောက်နဲ့ ပါးစပ်ပိတ်သင့်ပီ... ဘလော့ပါပိတ်တော့...
August 24, 2009 at 2:30 AM
August 24, 2009 at 2:33 AM
What is Minn Naing Oo's Citizenship? Singaporean? Not Myanmar anymore, right?
ကိုဂေါက် ပြောတဲ့လင့်က စင်ကာပူ အင်တာနေရှင်နယ် အာဘီထရေးရှင်း က CEO ပဲ အရမ်းလေးစားတယ်... ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေ အများကြီး လိုတယ်...
ကျမတို့နိုင်ငံ? Which country you are reffering? Who are you?
"အံ့သြစရာကောင်းသည့်အချက်မှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုး၍ ဟူသောအကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူ၏ ရာသီဥတုအနေအထားကို နှစ်သက်၍ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူရှိ လူမျိုးစုများ၏ ဖော်ရွေမှုကြောင့်ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူမှ အစားအသောက်များ၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ သုခုမအနုပညာများကို နှစ်သက်မြတ်နိုး၍ဟူသော အကြောင်းပြချက်မျိုးများကိုလည်းကောင်း လုံးဝမတွေ့ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။"
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ..။ အင်မတန် ထူးဆန်းအံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ကိုယ်နိုင်ငံသားခံထားတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာလည်း ကျေးဇူး သစ္စာ စောင့် သိပါ့မယ်လို့လည်း သစ္စာ ဆို ထားပြီး တစ်ကယ်လည်း မစောင့် သိ ကြဘူး...။သာပေါင်း ညာစား အခြောက်တွေထက်တောင်မှ စိတ်ဓါတ်ညံ့ဖျင်းသေးသိမ်တယ်။ အဲလို လူတွေက ဘာကောင်ကြီးပဲ ဖြစ်နေနေ မြန်မာနိုင်ငံသားပဲလုပ်လုပ်၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားပဲလုပ်လုပ် ၊ ဘယ်နိုင်ငံသားပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်မှာ ကျေးဇူးသစ္စာ စောင့်သိ တတ်တဲ့ စိတ် တပြားသားမှ မရှိတဲ့ အောက်တန်းစား အဆင့်က တက်မှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းတို့ လိုသာ နိုင်ငံခြားထွက်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း
အခြားနိုင်ငံသားပြောင်းကုန်ကြရင် ဒို့ တိုင်းပြည်ကြီး မခက်ပေဘူးလား..
ဒီမှာလာရှုတ်နေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒို့ များပါ အမြီးလိုက်ဖျက်ပေးရမှာလား..
တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသားသာ ကော်မန့် ရေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆို မလွယ်ဘူးနော်..)
We need to be united in order to fight against SPDC and to becomeaDemocratic Nation. Don't talk rubbish about you are because of citizen or PR or whatever.
So long as you are clear in your mind how you support, what you can do for country and when you are ready. That's it.
Please stop commenting unnecessary rubbish.
Again be united.
August 24, 2009 at 11:04 PM
August 24, 2009 at 11:17 PM
ကိုပေါ ..စင်ကာပူ န်ုင်ငံသား မပြောင်းခင် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို အောက်ပါ လင့် ကဖြည့် စွက်ထားသည် ဟု စာရေးသူက ဆိုပါသည် .အားလုံးဖတ်သင့်ပါသည်။ နိုင်ငံသား ပြောင်းပြီးသူများ ပိုမိုသဘောကျ ပါလိမ့်မည်။ http://www.scribd.com/doc/19042688/BurmeseSGEdition2
Good luck to Singapore as well, since many rude Burmese are in SG.
"စိတ်ချမ်းသာသလိုသာ ပြောခဲ့ပါ ကိုကို။ ခွိ ခွိ။"
စင်ကာပူ န်ုင်ငံသား မပြောင်းခင်/ ပြောင်းပြီးသူများ အားလုံး သိသင့့််ပါသည်။ အချက်အလက်တွေ အများကြီး ပါ ။http://www.yeocheowtong.com/index.html
တခါတုန်းက တို့ရွာမှာကိုပေါလို့ အများ ခေါ်တဲ့ ပေါကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက်ရယ်
သူအလုပ်လုပ်တဲ့အိမ် က မြို့ကျောင်းတက်သူဌေးသမီ:ကိုရင် မှာသိုသိပ် ကျိတ်ကျိတ်သာ ချစ်ရှာနေသတဲ့ကွယ်
January 31, 2010 at 10:27 AM
နောက်ဆုံးတော့လဲ...အဓိက က..အဓိက ပါပဲ :))))